တပ်မတော်သားများအတွက် ပြည်သူသာ အမိ အဖ ဖြစ်စေလို
သောကြာနေ့၊ မတ်လ ၂၆ ရက် ၂၀၁၀
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ၁၉၆၂ နှစ်ကတည်းက စစ်တပ်ကြီးစိုးလာခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် မနက်ဖြန်ဆိုလျှင် ၆၅ နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ ကျရောက်တော့မည် ဖြစ်ပြီး နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ စစ်အစိုးရ လက်အောက်တွင် တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနားသည် နိုင်ငံ၏ အကြီးကျယ်ဆုံး၊ ငွေကုန်ကြေးကျ အများဆုံး အခမ်းအနား ဖြစ်လာနေသည်။
မကြာသေးခင်က နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာခဲ့သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ စစ်သားဘဝကို မြတ်နိုးသူ၊ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦး၏ ယနေ့ တပ်မတော်အပေါ် သုံးသပ်ချက်များကို ဖတ်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။
မေး။ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့လား၊ တပ်မတော်နေ့လားဆိုတာ တချက်လောက် ရှင်းပြပေးပါ။ တပ်မှူးဟောင်း တယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လို ခံယူထားလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။
''စပြီးတော့ ဖြစ်လာတာက ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး နေ့ပါ။ ဟိုတုန်းက တပ်တွေ ဖွဲ့ကာစကတော့ မထင်ရှား သေးဘူးပေါ့။ နောက်ပိုင်းကျမှ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တပ်ထဲမှာ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး ဆိုပြီးတော့ ကျင်းပလာတယ်။ အဲဒီတုန်းက ရန်ကုန်မှာ ဖက်ဆစ် တော်လှန်းရေးနေ့ တပ်တွေထွက်တဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်ကို ဆောင်ပြီးတော့ကာ၊ မီးဒုတ်တွေဘာတွေနဲ့ စစ်ကြောင်းတွေက လှည့်ပြီးတော့ကာ ရွှေတိဂုံ အနောက်ဘက်မှာ ရှိတဲ့ ကျူးကျော် အိမ်တွေကို ဖျက်ပြီးတော့၊ မြို့တော်ဝန် ဗိုလ်မှူးကြီး ထွန်းစိန်က အဲဒီနေရာကို ရှင်းပြီးတော့ အဲဒီနေရာကို တော်လှန်ရေးပန်းခြံ ဆိုပြီး လုပ်တယ်။ ဟိုတုန်းက တော်လှန်ရေး ပန်းခြံက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်း ပြောပြီးတဲ့နောက်၊ အဲဒီက နေပြီးတော့ စပြီး ချီတက်တာကို အမှတ်အသား အနေနဲ့၊ ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ စစ်ကြောင်းတွေက မြို့ထဲကနေ တော်လှန်ရေး တိုင်းတွေ၊ ပြည်နယ်တွေက တပ်တွေလို နာမည်တပ်ပြီးတော့၊ စစ်ကြောင်းတွေ လုပ်ပြီး ချီတက်လာကြတယ်။ နောက်နှစ်မှာကျ မီးဒုတ်တွေ မပါတော့ဘူးပေါ့။ မီးဒုတ်တွေပါရင် မီးအန္တရာယ် ရှိတယ် ဆိုပြီးတော့ မပါတော့ဘဲ နောက်ပိုင်းမှာ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဖက်ဆစ် တော်လှန်းရေးပေါ့။ အဲဒီဟာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ပိုင်းကျတော့ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးနေ မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။ ဒီဟာကို ၂၇ ရက်နေ့က စစ်သည်တွေ ချီတာကို အကြောင်းပြုပြီး တပ်မတော်နေ့လို့ ပြောင်းလိုက်တယ်။ အဲဒီကျလို့ရှိရင် တပ်ထဲမှာ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားတွေ ကျင်းပပြီး၊ တပ်မတော်နေ့ ဆိုပြီး လုပ်လာတာတွေ ရှိတယ်''
''ကျနော် မှတ်မိသေးတယ်၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီ တက်လာတဲ့ အချိန်မှာ တပ်မတော်သားတွေဆီ ဆန္ဒတွေဘာတွေ မေးတော့ကာ ကျနော့်အနေနဲ့ ဆန္ဒပြုခဲ့တာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုတော့ တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနား လုပ်တာကတော့ လုပ်ပါ။ တပ်မတော်နေ့ ဆိုတာက ရှိရမှာပဲ။ တပ်မတော်သားတွေ ဂုဏ်ပြုတဲ့နေ့။ သို့သော် အဲဒီနေ့ဟာ တပ်မတော်ထဲမှာ အခမ်းအနား ကျင်းပတာလောက်ပဲ ကောင်းတယ်။ တကယ့် နေ့ထူးနေ့မြတ်က လွတ်လပ်ရေးနေ့။ မြန်မာနိုင်ငံကြီး လွတ်လပ်ရေးနေ့ဟာ အထွဋ်အမြတ်နေ့ ဖြစ်တယ်။ အထွဋ်အမြတ်နေ့မှာ တပ်မတော်သားတွေ အနေနဲ့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားလည်း လုပ်၊ ပြည်သူပြည်သားတွေ ဘက်ကလည်းပဲ၊ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ လည်းပဲ ပြည်သူနဲ့ တပ်မတော် အတူတကွ ချီတက်တဲ့ အခမ်းအနားတွေ လုပ်ပါ ဆိုပြီးတော့ အကြံဥာဏ်တွေလည်း ကျနော်တို့ ပေးခဲ့ဖူးတယ်''
''အဲဒါက မထိရောက်ဘဲ နောက်ပိုင်းမှာ တပ်မတော်နေ့ဆိုပြီး ဒီနေ့အထိ လုပ်လာတာပဲ။ အဲဒီနေ့မှာ အခမ်းအနား ကျင်းပပြီး တပ်ထဲမှာရှိတဲ့ စစ်သည်တော်များ အားလုံးအတွက် စစ်သွေးစစ်မာန်၊ ဇာတိသွေး ဇာတိမာန် တက်ကြွဖို့ အခမ်းအနား လုပ်တာပါ။ ဟိုတုန်းက အကြံပေးခဲ့ဖူးတာက လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာပဲ အဓိက ထားပြီးတော့ကာ တပ်မတော်သားတွေ အားလုံး ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ ပြောခဲ့ပေမယ့်၊ တချို့က တပ်မတော်နေ့လို့ သတ်မှတ်ပါ။ အဲဒီနေ့မှာ တပ်ထဲမှာ သူတို့ဘာသာသူတို့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေ လုပ်လို့ရှိရင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး သဘောတူညီမှုတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းမှာ စစ်ရေးပြ အခန်းအနားတွေနဲ့ပဲ လုပ်လာခဲ့တာ အခုထိပဲ။ အခုကျ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားကို နေပြည်တော်မှာ အကြီးကျယ်ဆုံး လုပ်တဲ့ သဘော ရှိတဲ့အတွက် စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားကို အကြောင်းပြုပြီး လုပ်လာတဲ့အတွက် တပ်မတော်နေ့ ဆိုပြီး တွင်ကျယ်လာတာပါပဲ''
''တကယ်စင်စစ်က မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က ဖက်ဆစ်တော်လှန်နေ့ကို အားလုံး ချီတက်ပြီး ထွက်ကြတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့၊ ထွက်တဲ့ တပ်တွေကလည်း သူတို့ဟာသူတို့ အမှတ်တရအနေနဲ့ ကျင်းပတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးနေ့ပါ။ ဖက်ဆစ် တော်လှန်နေ့က အမည် နာမ အနေနဲ့က အမှန်အကန်ပါပဲ။ သို့သော် စစ်သည်တော်သားများ အားလုံးအနေနဲ့ တပ်မှူးအကြီး အငယ်တွေအနေနဲ့ အားလုံး အဆင့်ဆင့်က အစဉ်အလာလိုဖြစ်ပြီး ပြောဆို လုပ်ကိုင် လာတာကတော့ ဒီနေ့အချိန်ထိ အခမ်းအနားတွေကို အကြီးအကျယ် လုပ်ပြီးတော့ တပ်မတော်နေ့ဆိုပြီး ဖြစ်လာတာပေါ့''
မေး။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးခေတ် နောက်ပိုင်းကာလ တပ်မတော်သားတွေနဲ့ လက်ရှိ တပ်မတော်သားတွေ ဘယ်လို ကွာခြား တာမျိုးတွေ ရှိလဲခင်ဗျ။
“သိပ်ပြီးတော့ ကွာခြားတာပေါ့ကွာ၊ ဟိုတုန်းက တပ်မတော်ဆိုတာက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင်က အင်မတန် ကောင်းမြတ်တဲ့ စံနမူနာကောင်းတွေ ပြသွားခဲ့တယ်။ သူ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေး ပြီးတဲ့အခါကျ တပ်ကို ပြန်ဖွဲ့တဲ့ အခါမှာ ဂန္ဓီ စာချုပ်အရ တပ်ကို ပြန်ဖွဲ့စည်းတယ်။ အရာရှိတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရွေးချယ်ခန့်ထားပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သူကိုယ်တိုင်က တပ်မတော်ထဲမှာ မနေတော့ဘဲနဲ့ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ ဖဆပလ ပါတီ အဖွဲကြီးထဲမှာ သွားပြီးတော့ ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက် ကြိုးပမ်းတဲ့ ဥစ္စာက တပ်မတော်နဲ့ နိုင်ငံရေး (နိုင်ငံရေးဆိုတာက ပါတီ နိုင်ငံရေးကို ပြောတာပေါ့လေ)၊ နိုင်ငံရေး ဆိုတာက ပြည်သူလူထု အားလုံးနဲ့ တပ်မတော် သားတွေက နိုင်ငံရေးရဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးရဲ့ သတ္တဝါတွေဖြစ်တော့ နိုင်ငံရေးဆိုတာက ရှိရမှာပဲ၊ ကင်းမှာ မဟုတ်ဘူး”
“သို့သော်လည်း တပ်မတော်ဟာ ပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့ တပ်မတော် ကင်းကင်းရှင်းရှင်း နေရမယ်ဆိုတာကို ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းက ပြခဲ့တယ်လေ။ ဒီအစဉ်အလာကို ထိန်းဖို့အတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နိုင်ငံအတွက် အသက်စွန့်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာလည်း တပ်မတော်ကို ဆက်လက် တာဝန်ယူတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် အထူးသဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း ခေတ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီအခါမှာလည်းပဲ ဒီအရှိန်အဝါနဲ့ ဆက်လက်ပြီး အကောင်အထည် ဖော်ဖို့အတွက် တပ်မတော် ညီလာခံတခုကို ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ ပဋိဥာဉ်စာတမ်းကို ရေးခဲ့တယ်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေကို တို့တတွေက အသက်ပေးပြီး ကာကွယ်ကြရမယ်။ အဲဒီဟာကို ကာကွယ်ဖို့ အကြောင်းချင်းရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်''
''အဲဒီမှာ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကိုယ်တိုင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီချုပ် စာတမ်းတစောင်ကို ဖတ်ပြတယ်။ အဲဒီဖတ်ပြတဲ့ စာတမ်းက ဘာလဲဆိုတော့ - တို့တပ်မတော်အနေနဲ့ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ရှေ့ကနေ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရပ်တည်ဖို့ အခုရှိနေတဲ့ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေကို အသက်ပေးပြီး တို့တတွေ ကာကွယ်ကြရမယ်။ နောင်သောအခါမှာ အခြေခံဥပဒေအပေါ်မှာ အခိုင်အမာ ရပ်တည်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေး တို့တတွေ လုံးပမ်းကြရမယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံမှာပါတဲ့ ဥပဒေအချက်အလက်တွေကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်တာရှိသော် ငါကိုယ်တိုင် မထောက်မညှာ ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒါကို မင်းတို့အားလုံး ဆွေးနွေးပြီးရင် ဒီဟာကို လက်မှတ်ထိုးကြပါ ဆိုတဲ့အတွက် ဒီဟာကို ၁၉၄၇ ခုနှစ် နိုင်ငံတော် အခြေခံဥပဒကို ကျနော်တို့ အားလုံးက နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ထောက်ခံအားပေးပြီး လက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။ အဲဒါက ဗမာ့တပ်မတော်ရဲ့ ပဋိဥာဉ်စာတမ်း ထုတ်ခဲ့တာ''
''ပထမဦးဆုံး ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကင်းကင်းရှင်းရှင်း ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲတို့ ဘာတို့ လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ပါတီပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို စစ်သည်စစ်သားများက ပါဝင်မှု မရှိဘဲနဲ့၊ မိမိတပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို မပတ်သက်ဘဲနဲ့၊ နောက်ပြီး သွားရောက်ပြီးတော့ သူတို့အတွက် ပြောပေးခြင်း၊ ဟောပေးခြင်း၊ ဆော်သြပေးခြင်း၊ လိုက်လံပြီး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း စသဖြင့် ပါဝင် ဆက်နွယ်ပြီးတော့ လုပ်လို့မရအောင် ကင်းကင်းရှင်းရှင်း ဖြစ်အောင် အမိန့်တွေ ထုတ်ထားတဲ့အတွက် တိတိကျကျပဲ လိုက်နာခဲ့ကြရတယ်''
''အခုကျတော့ တဖြည်းဖြည်း ပတ်သက်ပြီး သံယောဇဉ်တွေက ရှိခဲ့တာကိုး။ သံယောဇဉ်ရှိတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး၊ လိုက်နာပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအားဖြင့် နောက်ဆုံး တပ်က နိုင်ငံရေးထဲမှာ တဖြည်းဖြည်း အထူးသဖြင့် ပါတီနိုင်ငံရေးထဲမှာ တပါတီ၊ တဖွဲ့၊ လူတဦး အကျိုးစီးပွား အကျိုးငှာ အသုံးချခံလိုက်ရတဲ့ ဘဝကို ရောက်သွားတဲ့ဟာမျိုး ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ အခုတော့ ဒီအခြေအနေ အတိုင်းပဲ ဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။ နိုင်ငံတော်မှာ နဂိုမူလက ဆောင်ပုဒ်က ရှိပြီးသား “ပြည်သူသာလျှင် အမိ၊ ပြည်သူသာလျှင် အဖ” ၊ “ပြည်သူသာလျှင် မိမိတို့၏ အင်အားစု” ဖြစ်တယ်။ ဒီပြည်သူတွေမှာလည်း တပ်မတော်သားတွေ ပါဝင်ခဲ့တာပဲ။ အဓိကဖြစ်တဲ့၊ မိဘတွေဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတွေဟာ တကယ်ပဲ တပ်မတော်သားတွေရဲ့ အမိအဖ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ တပ်မတော်သားတွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ ကိန်းအောင်းအောင် လုပ်ခဲ့တာပဲ''
''အခု ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူး၊ တပ်မတော်သာ အမိ၊ တပ်မတော်သာ အဖ၊ အားလုံးက ဘယ်လို အတွေးအခေါ် ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ ညောင်ညိုပင်ကြီးရဲ့ အရိပ်ဟာ ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးရဲ့ အရိပ်ပဲလေ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ အရိပ်ကြီးကို ဝင်ရောက်ပြီးတော့ လာတဲ့ တပ်မတော်က သူတို့အနေနဲ့လည်း သူတို့ကိုယ် သူတို့၊ သူတို့အရိပ်လို့ ထင်ပြီးတော့ ဒီအရိပ် အာဝါသအောက်မှာ နေရတာကို မေ့လျော့နေပြီး သူတို့ဟာသူတို့ သီးခြားရပ်တည်တဲ့ အရိပ်ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အနေနဲ့ လုပ်ကိုင် သွားနေတဲ့ သဘောတွေကတော့ မှန်ကန်လှတယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီဟာရဲ့ သဘောကတော့ ဒီနေ့ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေအားလုံး တွေ့မြင်နေရတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ အဲဒီလို ဖြစ်သွားတဲ့ သဘောရှိနေတော့ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ အရင်တုန်းက တွေးခေါ်ခဲ့တဲ့၊ ပြည်သူတို့ရဲ့ ကြားထဲမှာ ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့အညီ နေထိုင် သွားရမယ်ဆိုတဲ့ ဟာကိုတော့ ပြန်ရောက်လာအောင် လုံပမ်းကြိုးစားဖို့ အကုန်လုံးမှာ တာဝန်ရှိကြတယ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့ မြင်ပါတယ်''
မေး။ တပ်မတော်သားတွေ လိုက်နာရမယ့် စစ်သည်တော်များ ကျင့်ဝတ်ကို ဒီကနေ့ခေတ် စစ်သည်တော်တွေ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု ရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပါဦးခင်ဗျ။
“အဓိက တပ်မတော်သားတွေက ''ပြည်သူတွေအပေါ်မှာ ရေလိုလလို ကျင့်ရမယ်'' ဆိုတဲ့ဟာက တပ်မတော်သားတွေက ပြည်သူလူထု အပေါ်မှာ အေးမြတဲ့ သဘော ပေးရမှာ ရှိတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ နိုင်ငံတော်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖြစ်လာတဲ့ ''ရန်သူအပေါ်မှာတော့ နေလိုမီးလို ကျင့်ရမယ်'' ဆိုတာတွေ ရှိတယ်။ ပြည်သူလူထုဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ရန်သူမှ မဟုတ်ဘဲ။ အမိအဖတွေက ကိုယ့်ရဲ့ ရန်သူမှ မဟုတ်ဘဲနဲ့ သေသေချာချာ အမြင်ကောင်းတွေ မြင်ပြီးတော့ သွားဖို့တော့ လိုတာပေါ့’'
''ဟိုအရင်တုန်းက စစ်သည်တော် ကျင့်ဝတ် ၆ဝ ဆိုပြီး ရေးထားတာ ရှိတယ်။ ရဲဘော်တယောက်ချင်း ကျင့်ရမယ့် ကျင့်ဝတ်၊ ရဲဘော် အချင်းချင်းအပေါ် ကျင့်ရမယ့် ကျင့်ဝတ်၊ ပြည်သူပြည်သားတွေ အပေါ်မှာ ကျင့်ရမယ့် ကျင့်ဝတ်၊ ရန်သူပေါ်မှာ ကျင့်ရမယ့် ကျင့်ဝတ်ဆိုတာတွေ ရှိတယ်။ ဒါတွေက ၆ဝ ရှိခဲ့တာပဲ။ ဒီနောက်ပိုင်း ကျတော့ကာ ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံ တည်ထောင်မယ် ဆိုတော့ကာ တချို့ အချက်အလက်တွေကို ဖြည့်ပြီးတော့ ရေးတာတွေလည်း ရှိတယ်။ တချို့ နေရာတွေမှာလည်း ထပ်ဖြည့်တာတွေ ရှိတယ်။ ဆိုတော့ကာ စစ်သည်တော် ကျင့်ဝတ်က အရင်တုန်းက စစ်သည်တော် ၆ဝ မဟုတ်တော့ဘဲ တော်တော်များများ ဖြစ်ကုန်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာလည်း ကြွေးကြော်သံတွေကလည်း အများကြီး ရှိတယ်။ အားမာန် ၁ဝ ချက်၊ ခွန်အား ၁ဝ ချက်တို့ ဘာတို့ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေက တော်တော်ကို များတယ်။ နှစ်လည်း ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် တော်တော်များများ အသေးစိတ် မသိတော့ဘူး''
''အရင်တုန်းက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဟာတွေကတော့ ပြည်သူတွေနဲ့ တသားတည်း၊ ပြည်သူတွေသည် အမိ၊ ပြည်သူတွေသည် အဖ ဖြစ်တဲ့အတွက် မိဘသဖွယ် ထားရတဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ်မှာ သားကောင်းတယောက် စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ လုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ အဓိကဟာကို ရေးထားတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်။ အခုဟာက အဲဒီလို မဟုတ်တော့ဘူး။ တပ်မတော်သည် အမိ၊ တပ်မတော်သည် အဖဆိုတာတွေကို တချို့နေရာမှာ ကြားတယ်။ အပေါ်ကနေပြီးတော့ တပ်မှူးကြီးများက လုပ်ဆောင် ပေးနေတဲ့အတွက် စစ်သည်တော်များက အောက်မှာ စားရသောက်ရနေရ ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပြီးတော့ အပြင်က လူထုနဲ့ မတူဘဲနဲ့ ပိုပြီးတော့ စားရသောက်ရ ပြည့်စုံအောင် စားရသောက်ရ ဖြစ်တဲ့အတွက် အထက်အဆင့်ဆင့်သော ဗိုလ်ကြီးတွေအပေါ်မှာ အင်မတန် အားကိုးစရာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောဆိုသုံးစွဲလာတာတွေ ရှိလာတယ်။ အဲဒီ အတွေးအခေါ်တွေ ကတော့ မကောင်းတဲ့ အတွေး အခေါ်တွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါက အရင်တုန်းက ထားရှိခဲ့တဲ့ သဘော သဘာဝတွေနဲ့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်လာတဲ့ အနေအထားတွေ ဖြစ်လာပါတယ်''
မေး။ တပ်မတော်သားတွေအတွက် ရသင့်ရထိုက်၊ ခံစားသင့် ခံစားထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို တပ်မတော်တွင်းမှာ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ပါသလဲ။
''တိုင်းပြည်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းကောင်းအနေနဲ့ ဝန်ထမ်းကောင်းအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရမှာပေါ့။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတွေက ကျွမ်းကျင်သလို၊ စစ်သည်တော်လည်း စစ်သည်တော်အလျောက်၊ ဝန်ထမ်းဆိုရင်လည်း ဝန်ထမ်းကောင်း အလျောက်ပေါ့။ တပ်မတော်သားတွေ အနေနဲ့ ဝန်ထမ်းကောင်းပဲ။ သူလည်း ကျွမ်းကျင်တဲ့ အတတ်ပညာနဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ကာကွယ်ရေး၊ လုံခြုံရေးကို ဆောင့်ရွက်ရမှာပေါ့။ အလားတူပဲ ဟို .. ထိပ်ပိုင်းရောက်နေတဲ့ သူတွေကလည်း၊ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူ့ရဲ့ အတိုင်းအတာ ကြီးမားတဲ့အတွက် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှာ ဖြစ်တာပဲ။ အဲဒီလို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်တဲ့ အတွက် သူကျွမ်းကျင်တဲ့ ကာယ၊ ဥာဏ၊ ဝီရိယအားအတွက် နိုင်ငံတော်ကရတဲ့ အခွန်အတုတ်တွေ ထဲက သူတို့အတွက် လုံလောက်တဲ့၊ နေနိုင်ထိုင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်အောင် ထိုက်သင့်အားလျှော်စွာ နေနိုင်ထိုင်နိုင်အောင် နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံ့ ကူညီပေးဖို့ လိုတယ်။ စစ်သည်တော်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဇနီးသားမယား မိသားစုလည်း သူတို့ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ လုပ်ဆောင်တဲ့အတွက် ထိုက်သင့်အားလျော်စွာ ခံစားစံစားနိုင်ဖို့အတွက် ပြည်သူလူထုရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေကနေ အချိုးကျ ပေးထားတာ ရှိတယ်။ စစ်မြေပြင်မှာ ထိမှု၊ ခိုက်မှု၊ ရှမှု အားလုံးကိုလည်း သူတို့ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် လုံးဝ ခံစားဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးထားတာပဲ”
''ထိုက်သင့်အားလျော်စွာ သုံးဆောင်ပြီးရင် နောက်ဆုံး တပ်မတော်က အနားယူပြီး အပြင်ရောက်တဲ့ အခါမှာလည်း သူတို့ရဲ့ နေထိုင်စားရေး သောက်ရေး၊ ရှင်သန်ရေး အတွက်ကိုလည်းပဲ တိုင်းပြည်ကနေ ပြန်လည် ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ အစီအမံ ကောင်းတွေ ရှိထားတာပဲ။ အဲဒီ ရှိထားတဲ့ အတိုင်းအတာ အလျောက်မှာပဲ ခံစားစံစား သွားတာက အမှန်ပဲ။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ၊ မိမိ ရသင့် ရထိုက်တာ မဟုတ်ဘဲ ပိုလျှံပြီးတော့ ကိုယ်ကျိုးအတွက်၊ တဦးတယောက်အတွက်၊ မိသားစုအတွက် ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ ပိုပြီးတော့ လောဘတက်ပြီး ယူဆောင်နေတာ ဖြစ်လာရင်တော့ အင်မတန်မှ မကောင်းတဲ့ အယူအဆ၊ အလေ့အထ၊ အကျင့်အကြံတခု ဖြစ်လာမယ်။ ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘဏ္ဍာတော်တွေ သုံးရစွဲရတဲ့ အပိုင်းမှာ သူတို့ကို ပိုမိုပြီး အများအစား ပေးပြီးတော့ လူမှုရေးဖြစ်တဲ့ ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးရဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ တခြားရရှိတဲ့ အခွင့်အရေးက နည်းပါးပြီးတော့ အထောက်အပံ့ နည်းလာမယ်။ အားအင် နည်းလာလို့ရှိရင် နောင်တပ်မတော်မှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရမယ့် အင်အားကို ပြန်ဖြည့်ဖို့ အတိုင်းအတာကျရင် အားအင်ချိနဲ့တာ ဖြစ်လာမယ့် အတိုင်းအတာ ဖြစ်တယ်''
''အဲဒါကို မြင်ပြီးတော့ အရှည်ကို စဉ်းစားတဲ့အနေနဲ့ တပ်မတော်မှာ ဝင်လာပြီးရင် သူတို့အတွက် ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးပြီး သူတို့ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေစဉ် အတွင်း၊ စစ်ဘက်မှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေစဉ် အတွင်း၊ နောက်ပြီး စစ်ဘက်မှာ အနားယူချိန်အတွင်း ဒါတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အတွင်းမှာသာလျှင် ဖြည့်ဆည်းအောင် ဆောင်ရွက်ကြဖို့ လိုတယ်။ သူတို့ အပြင်ရောက်တဲ့ အခါမှာလည်း နိုင်ငံတော် အတွင်းမှာရှိတဲ့ အစားအသောက်၊ ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း စတဲ့ ဒါတွေကလည်းပဲ အားလုံး ညီမျှအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမှု လုပ်ဆောင်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီပြဿနာတွေက ပြေလည်စရာတွေ ရှိတာပေါ့”
မေး။ တပ်မတော်သားအတွင်းမှာ အထက်အောက် ကွာဟမှုတွေ များလာတဲ့အပေါ် ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ။
''အတိုင်းအတာတခုထိ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးထားတွေ ရှိတာပေါ့။ သို့သော်လည်းပဲ အရာရှိရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် အပေါ်ပိုင်း၊ ထိပ်ပိုင်းကိုး။ အခု အခြေအနေကို ကြည့်ရတာက အခွင့်ထူးခံချင်တဲ့ အနေအထား ရှိလာတာတွေ များတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ တိုင်းပြည် တခုမှာ စည်းလုံး ညီညွတ်မှုနဲ့ တပ်မတော်သား တခုလုံး ညီညီညာညာ ဖြစ်ရမယ် ဆိုလို့ရှိရင်တော့ သူ့ဟာသူ ပေးထားတဲ့ အခွင့်အရေးကောင်းတွေ မျှမျှတတ အချိုးအစားနဲ့ အောက်ဆုံးအဆင့်မှာ ရှိနေတဲ့ စစ်သည်တော်နဲ့ အထက်ဆုံးမှာ ရှိနေတဲ့ စစ်သည်တော်များ ရတဲ့ လစာနဲ့တကွ ရရှိမှု နှုန်းထားက သိပ်ပြီးတော့ ကွာခြားမှုမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး ဆိုတာကိုတော့ အရင်တုန်းက အတွေးအခေါ် ရှိခဲ့ဖူးတာပေါ့။ အဲဒီလို ဖြစ်ဖို့တော့ ကြိုးစားဖို့ လိုတာပေါ့''
မေး။ တပ်သားအဆင့်မှာ ရှိတဲ့ မိသားစုတွေက ရတဲ့ လစာနဲ့ မလောက်ငလို့ တခြားလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေရတယ်။ တပ်မတော်သား ဇနီးသည်တချို့ ခန္ဓာကိုယ်ရောင်းစားရတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရာရှိတွေရဲ့ မိသားစုဝင် တွေကျ ချမ်းသာနေကြတယ်။ အဲဒီလို တပ်တွင်းမှာ ကွာခြားမှုတွေ ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်လို ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်သင့်တယ်လို့ ထင်လဲခင်ဗျ။
''အခုဟာက ပြောဆိုသံတွေ ကြားလည်း ကြားနေရတယ်။ မြင်လည်း မြင်နေရတယ်။ တွေ့လည်း တွေ့နေရတယ်။ ကွာခြားတာတွေ ရှိနေတယ်။ အမှန်က ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ အပြင်မှာ ပင်စင် ယူသွားပြီးလို့ရှိရင်၊ အငြိမ်းစား ယူသွားပြီးလို့ ရှိရင် သူတို့ဟာသူတို့ ထိုက်သင့်အားလျော်စွာ ရပ်တည်နိုင်အောင် ဆိုလို့ရှိရင် အပြင် စီးပွားရေး အနေအထားက ကောင်းဖို့လိုတယ်။ စီးပွားရေး အနေအထားက အားလုံး မျှမျှတတ စားနိုင်တဲ့ အနေအထား ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ အခုဟာက ဒီလို မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ အပြင်မှာ စားရေး သောက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အင်မတန် ကျပ်တည်းနေတဲ့ ဟာကို အကြောင်း ပြုပြီးတော့ကာ အောက်ခြေ အောက်လက်မှာရှိတဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ မလုံလောက်လို့၊ မညီမျှလို့၊ မမျှတလို့တွေ ရှိနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရက လစာတွေကို တိုးပြီးပေးတာက ၄ နှစ် တခါလောက် လုပ်တယ်။ သို့သော် အဲဒီလို လုပ်ပင်လုပ်ငြားသော်လည်းပဲ မပြည့်မီဘူး''
''ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အပြင်မှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အစစအရာရာရော၊ စီးပွားရေး အခြေအနေ အရရော ပိုမို ကောင်းမွန်လာတဲ့ အခြေအနေအထားမှာ မရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဒီလိုပြဿနာတွေက တောက်လျောက် ဖြစ်နေမှာပဲ။ အထက်ပိုင်း ရောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အနေနဲ့လည်း ဒီဟာကို ကြည့်ပြီးတော့ - တို့ အပြင်ကို ရောက်ခဲ့လို့ရှိရင် တို့ လက်ရှိနေရတဲ့ အခြေအနေကနေ ပိုမို ဆုတ်ယုတ်ပြီး နေရမလားဆိုပြီး၊ အကုန်လုံးကိုတော့ မဆိုလိုဘူး၊ တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက လုံးပမ်းရင်းနဲ့ ချမ်းသာတဲ့ အပိုင်းက သိပ်ပြီး ချမ်းသာ၊ မချမ်းသာတဲ့ အပိုင်းက မချမ်းသာ၊ သိပ်ပြီး ဒုက္ခရောက်တဲ့ အပိုင်းက ဒုက္ခရောက်၊ အဲဒီလိုပဲ မညီမညာ ဖြစ်ကုန်တဲ့အပိုင်း ဖြစ်တယ်။ အပြင်မှာ စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရာအားလုံး၊ စစ်သည်တော်တွေ ရရှိမယ့် အခွင့်အရေးတွေ အားလုံး၊ တတ်နိုင်သမျှ တိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ် ဆိုရင် ဒီကွာဟမှုက တဖြည်းဖြည်း အခြေအနေကောင်းကို ဦးတည် သွားလိမ့်မယ်လို့တော့ ထင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီပုံစံအတိုင်းက ဒီလမ်းကို မမြင်သေးဘူးဆိုတဲ့ သဘောရှိတယ်''
မေး။ တပ်မှူးဟောင်းတယောက်အနေနဲ့ တပ်မတော်သားတွေနဲ့ ပြည်သူတွေကို ဘယ်လို ပြောပြ ချင်တာတွေ ရှိပါသလဲ။
''စစ်မှူးထမ်းလုပ်တယ်ဆိုတာ အင်မတန်ကို တိုင်းပြည်အတွက်၊ တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက် အသက်အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်တွေကို ကာကွယ် ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ မူတွေအနေနဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်လုပ်တာ ဖြစ်တယ်။ မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်လုပ်ရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်လုပ်တာပဲ ကောင်းတယ်။ ဒီလိုမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့၊ စစ်သည်တော်များ လုပ်ရမယ့် အပိုင်းတွေမှာ ဒီလိုအခြေအနေမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျန်တဲ့ တခြားကိစ္စ အဝဝတွေမှာ စိတ်ပါဝင်စားမှု ရှိလို့ရှိရင် မူလ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ကတော့ အထမြောက် အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာတာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် စစ်သည်လုပ်ငန်းကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်လို့ လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်၊ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင် သီးခြား ဝန်ထမ်းကောင်းဖြစ်ဖို့၊ လုပ်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲနဲ့ လာတယ်ဆိုကတည်းက ရည်ရွယ်ချက်ကိုက မှားယွင်းတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရောက်လာတယ်ဆိုရင် မကောင်းဘူး''
''ဒီဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းဟာ တခြားတခြားသော အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ မတူဘဲနဲ့ ထူးခြားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လို့ ထူးခြားတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရှိငြားသော်လည်းပဲ ကိုယ်ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အတိုင်းအတာ ရပြီးတော့၊ အနစ်နာခံပြီးတော့ လုပ်ဆောင် သင့်တယ်။ တပ်ထဲမှာ ဝင်ကတည်းက ဆင်းရဲမယ်၊ အနစ်နာခံမယ်၊ ဒါတွေက နဂိုမူလအရ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝ ပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အနစ်နာခံမယ်၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်မယ်ဆိုတဲ့ စသဖြင့် ဟာတွေက ပြန်လည်ပြီး ရှိလာဖို့အတွက် လုပ်ကိုင်သွားကြဖို့ လိုတယ်။ အဲဒီကျမှာသာလျှင် တဖြည်းဖြည်း အားကိုးရာ ဖြစ်မယ်။ အခုကြည့်ရတာက လူအင်အားတွေ သိပ်ပြီး တိုးပြုနေတာထက် အရည်အချင်း အင်အား ထပ်တိုးဖို့လိုတဲ့ သဘောသဘာဝတော့ ရှိတယ်''
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 9:33 PM ,0comments
သောကြာနေ့၊ မတ်လ ၂၆ ရက်
၆၅ နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ အကြိုတွင် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု ကာလမှသည် ၁၉၉ဝ ခုနှစ် အစောပိုင်း ကာလများ ထိအောင် အဓိက နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက် အင်အားစုများ ဖြစ်သော ကွန်မြူနစ်၊ ဆိုရှယ်လစ်တို့၏ အမြင်များကိုလည်း စုစည်း တင်ပြထားရာ ယခု အင်တာဗျူးတွင် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း၏ တပ်မတော်အပေါ် အမြင်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ပြထားသည်။
မေး။ မနက်ဖြန်မှာ မြန်မာအစိုးရက တပ်မတော်နေ့ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗကပ) အနေနဲ့ ဒီကိစ္စအပေါ် ဘယ်လို တုံ့ပြန် ပြောဆိုချင်လဲ ခင်ဗျ။
''မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ဟာ ဖက်ဆစ်တော်လှန်းရေးနေ့ ဆိုတာ လူတိုင်း သိကြပါတယ်။ အဲဒါကို စစ်အစိုးရတွေကနေ စပြီးတော့၊ ဗိုလ်နေဝင်း လက်ထက်ကနေ စပြီးတော့ သူ့တို့ တပ်မတော်နေ့ အဖြစ် လုယူထားတာ ဖြစ်တယ်။ တကယ်ကျတော့ ဒီတပ်မတော်ဟာ ဖက်ဆစ် ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေး လုပ်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်နဲ့၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်နဲ့ ဆိုလို့ရှိရင် အများကြီး ကွာသွားပြီ။ အဲဒီတုန်းက မျိုးဆက်တွေနဲ့လည်း အများကြီး ကွာသွားပြီ။ အစဉ်အလာတွေလည်း လုံးလုံး စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီ လို့လည်း ပြောလို့ ရပါတယ်''
''မောင်ပိုင်စီးပြီးတော့ ပြည်သူလူထု အထွဋ်အမြတ်ထားတဲ့ နေ့တနေ့ကို ပြည်သူတွေ အပေါ်မှာ သတ်ဖြတ်နေတဲ့၊ ညှဉ်းဆဲနေတဲ့ တပ်မတော်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့နေ့ အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်တာဟာ မြန်မာပြည်သူ လူထုတွေနဲ့ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေး လုပ်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်သားတွေ၊ ပြည်သူတွေကို စော်ကားလိုက်တာလို့ ကျနော် ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီဟာလိုပဲ တခြားသမိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မဆလ (မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ) အစ၊ နအဖ (နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ) က သူတို့ ကပြောင်းကပြန် လုပ်ထားခဲ့တဲ့ ဟာတွေက အများကြီး ရှိတယ်။ တနေ့ကျရင် အားလုံး လှန်ပစ်ရမယ်။ အားလုံး တည့်မတ် ယူရမယ်လို့တော့ ကျနော် မြင်ပါတယ်''
မေး။ တပ်မတော်ကို စပြီး သန္ဓေတည်ခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ ဒီကနေ့ တပ်မတော်ရဲ့ အခြေအနေဟာ ဘယ်လို ကွာဟချက်တွေ၊ ကွာခြားချက်တွေ ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောနိုင်မလဲ ခင်ဗျ။
''အရင်တုန်းက တပ်မတော်က ပြည်သူလူထုကို ကယ်တင်ဖို့အတွက်၊ ပြည်သူလူထုကို ဖိနှိပ်တဲ့ ဖက်ဆစ် နယ်ချဲ့ကို မောင်းထုတ်ဖို့ အတွက်၊ လိုအပ်ရင် ချေမှုန်းပစ်ဖို့ အတွက် တည်ထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဟာက အဲဒါနဲ့ ပြောင်းပြန်။ နယ်ချဲ့ ဖက်ဆစ်ကို တိုက်တာလည်း မရှိ၊ ကိုယ့်ပြည်သူ လူထုကို နှိပ်စက်နေတဲ့ တပ်မတော် ဖြစ်နေပါတယ်။ အရင်တုန်းက တပ်မတော်ရဲ့နောက်မှာ ပြည်သူလူထုကြီးက သွေးစည်း ညီညွတ်ခဲ့ကြတယ်။ တိုင်းပြည် စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးအတွက် တပ်မတော်က အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ခဲ့တယ်။ အခု ကျတော့ တပ်မတော်ရဲ့နောက်မှာ ပြည်သူလူထုက မရှိတော့ဘူး။ ဒီတပ်မတော်လည်း ပြည်သူလူထု သွေးစည်း ညီညွတ်မှုကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့၊ သွေးခွဲပေးနေတဲ့ တပ်မတော် ဖြစ်နေပါတယ်''
မေး။ တပ်မတော်ဟာ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ဒီကနေ့ ထိန်းသိမ်းထားရတဲ့ အဖြစ်ဟာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ပေါ်ပေါက် လာတာလဲခင်ဗျ။ နိုင်ငံရေး နောက်ခံလေး ပြောပြ စေချင်ပါတယ်။
“ဒီတပ်မတော်ဟာ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ဖဆပလ (ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး) ထဲက ဆိုရှယ်လစ်တွေကို တပ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဗိုလ်နေဝင်းတို့ အုပ်စုတို့က နေပြီးတော့ ပြည်တွင်းစစ်ကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီးတော့ တောထဲကို မောင်းပို့လိုက်တဲ့ အခါကျတော့၊ ဒီကနေ့ ကျောင်းသားတွေ တောခိုရတဲ့ အဖြစ်မျိုး ရောက်အောင်၊ ဒီလမ်း ရောက်အောင် တမင် တွန်းပို့လိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ပြည်တွင်းစစ် ဆိုတော့ ပြည်သူတွေ ကြားထဲမှာ ပစ်ရတဲ့အတွက် တပ်မတော်ဟာ ပြည်သူတွေကို နှိမ်နှင်းတာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ဖဆပလ အစိုးရ လက်ထက်မှာ စစ်တပ်နဲ့ စစ်အုပ်စု၊ ဆိုလိုတာကတော့ ဆိုရှယ်လစ် စစ်ဗိုလ်အုပ်စုရဲ့ အင်အားက တဖြည်းဖြည်း တန်ခိုးထွားလာတယ်။ သူတို့က လက်နက် ကိုင်ထားတာ ဖြစ်နေတော့ ကျန်တဲ့ ဖဆပလ ထဲက ခေါင်းဆောင်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူတို့ကို မယှဉ်နိုင်ဘူး ဖြစ်လာတယ်။ စစ်အုပ်စုက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အင်အားကြီးလာပြီး ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံး အာဏာ သိမ်းတာ လုပ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီကစပြီးတော့ သူတို့က အာဏာရဲ့ အရသာကို သိသွားပြီးတော့ ချက်ချင်းပဲ ၁၉၆ဝ ခုနှစ်မှာ အာဏာ ပြန်အပ်ပေးတယ်။ ဘာမှ မကြာဘူး တနှစ်၊ ၂ နှစ် အတွင်း ဖြစ်တဲ့ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ အာဏာ ပြန်သိမ်းယူခဲ့တာ ဒီနေ့အထိပဲ။ အာဏာကို သူတို့က အုပ်စီးမယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ ဘဏ္ဍာ အရင်းအမြစ်၊ သဘာဝ သယံဇာတ အရင်းအမြစ် အားလုံးကို သူတို့ပဲ ခံစားမယ်။ သူတို့ပဲ အဓိက ခွဲဝေ သုံးစွဲမယ်ဆိုတဲ့ ပေါ်လစီ ချမှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်''
မေး။ နိုင်ငံတကာမှာတော့ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေး၊ လုံခြုံရေးကဏ္ဍ အတွက်ပဲ တပ်မတော်ကို ထားချင်ကြ ပါတယ်။ အဲဒီအမြင်တွေနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အနေအထားကရော ကိုက်ညီမှု ရှိပါရဲ့လားဗျ။
“တပ်မတော်ဆိုတာက လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့ သူတွေဟာ နိုင်ငံရေး အဆောက်အအုံနဲ့ ကင်းအောင်နေတာ ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီ ၂ ခု ရောထွေးသွားလို့ ရှိရင် ဘယ်တိုင်းပြည်မဆို ဒုက္ခ ရောက်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပြည်သူလူထု ဒုက္ခ ရောက်တတ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေက တချို့တိုင်းပြည်တွေမှာ တွေ့တတ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေက ကြာရှည် မရှိပါဘူး။ ကာလတိုတခု ဖြစ်တယ်။ ဗမာပြည်မှာသာ ကမ္ဘာ့သမိုင်း စံချိန်တင်လောက်တဲ့ ရာစုနှစ်တဝက် ကျိုးတော့မယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ သက်တမ်း နောက်နှစ်ဆို ကျိုးတော့မယ်။ ဒါမျိုးက မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်တဲ့ဟာ။ တိုင်းပြည်နာဖို့၊ လူထုနာဖို့၊ အိမ်နီးနားချင်း နိုင်ငံတွေ နစ်နာတဲ့အဖြစ်လည်း ရောက်ပါတယ်''
မေး။ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေဟာ စစ်တပ်က နိုင်ငံတော် အာဏာကို ဆက်ထိန်းထား ရအောင်လို့ ရေးဆွဲထားတာလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ ခင်ဗျ။
“ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီ ရွေးကောက်ပွဲဟာ စစ်တပ်က အာဏာကို ထိန်းထားတာက အလွယ်တကူ မဟုတ်ဘူး။ သူက တရားဝင် ဖြစ်သွားမယ်။ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်နဲ့ ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် ကမ္ဘာတိုင် ထိန်းသွားဖို့လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ဒီဟာကို လုပ်တဲ့ဟာက သာမန် မဟုတ်ဘူး။ ပြင်ဆင်ပြီးလို့။ ပြင်ဆင်တာက ဗိုလ်ခင်ညွန့် လက်ထက်ကတည်းက လမ်းပြမြေပုံချပြီး ပြင်ဆင်လာတာက အကြာကြီးပဲ။ အနှစ် ၂၀ နီးပါး ပြင်ဆင်ပြီးတော့ လုပ်လာတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ဒီလိုလုပ်တဲ့ဟာက သူတို့ ပိုင်ပြီဆိုပြီး လုပ်တာဖြစ်တယ်။ သူတို့ အားနည်းလို့ နောက်ဆုတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ (တချို့က အဲဒီလို လျှောက်ပြောနေတာရှိလို့)။ သူတို့အားနည်းလို့ နောက်ဆုတ်လိုက်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ ပြင်ဆင်ပြီးလို့ အပြတ်လုပ်တာ ဖြစ်တယ်။ အပြတ်လုပ်တာက အဓိကကျတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် တခုလုံးကို အညွန့်ချိုးဖို့၊ နိုင်ငံရေး အညွန့်ချိုးဖို့ ကြိုးစားတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီ ၂ ခု အညွန့်ကျိုးလို့ ရှိရင် ဗမာပြည် ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ တိုက်ပွဲတွေလည်း အညွန့်ကျိုးသွားမယ် ဆိုတာကို မျှော်လင့်ပြီးတော့၊ ယူဆပြီးတော့ စီမံကိန်းကျကျ လုပ်လာတာ ဖြစ်တယ်'
မေး။ တပ်တော်ရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေကို ဘာများ မှာကြားချင်ပါသလဲ။
“တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကလည်း တပ်မတော်တွင်းမှာရှိတဲ့၊ ရိုးသားတဲ့၊ ပြည်သူလူထု အပေါ်မှာ သံယောဇဉ် ရှိတဲ့ အဆင့်အသီးသီးက တပ်မှူးတပ်သား အားလုံးကို ပြောချင်တာကတော့ ဒီနေ့ ဗမာပြည်ကြီးဟာ သူတို့လည်း သိတယ်၊ သူတို့လည်း မြင်နေတယ်၊ အင်မတန်ကိုမှ အခြေအနေ ဆိုးနေပါပြီ။ နိုင်ငံတကာမှာ ဆင်းရဲရုံတင်မက ဂုဏ်သိက္ခာလည်း ကျနေပါပြီ။ အဲဒါအတွက် တရားခံက တပ်မတော်လို့ လုံးလုံးလျားလျား ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေ ကနေ ပြန်လည် ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြပါလို့ ကျနော့် အနေနဲ့ မေတ္တာ ရပ်ခံချင်ပါတယ်''
နေ့စဉ်သတင်းများ ( ၂၆ - ၃ - ၁၀ )
■ (၆၅) နှစ်မြောက် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် လူငယ်များ စာဖတ်ဝိုင်းကျင်းပ သတင်း
■ အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်များ၏ (၇) ကြိမ်မြောက် ပြည်နယ်တိုင်း အစည်းအဝေး ဦးတင်ဦး တက်ရောက် သတင်း
■ နိုင်ငံရေးကင်းတဲ့ ပြည်သူချစ်တပ်မတော်တရပ်ဖြစ်ဖို့ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေ တိုက်တွန်း သတင်း
■ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ သတင်း
■ အန်အယ်လ်ဒီ မှတ်ပုံမတင်ဖို့ တိုက်တွန်းချက်တွေ ထွက်ပေါ်လာ သတင်း
■ လွတ်လပ်တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ဂျပန်အစိုးရ မြင်တွေ့လို သတင်း
■ စာပေစိစစ်ရေးက ခွင့်ပြုမှ နိုင်ငံရေးပါတီများ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့်ရမည် သတင်း
■ မြန်မာနိုင်ငံအရေး စက်မှုထိပ်သီး (၈) နိုင်ငံ ညီလာခံမှာ ဆွေးနွေးသင့် သတင်း
■ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကို ကုလ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ ရှုတ်ချ သတင်း
■ မြန်မာရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် စိတ်ပျက် သတင်း
■ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေ ဖွဲ့စည်းရေး စစ်အစိုးရ ILO နဲ့ ဆွေးနွေး သတင်း
■ လုံထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ရဟန်းတော်များက တိုင်တွင် ကြိုးဖြင့် ချည်နှောင်ပြီး ဆိုဆုံးမ သတင်း
■ အဖွဲ့ချုပ်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ရှေ့နေများကောင်စီ ရှင်းလင်းပြောကြား သတင်း
■ ပါတီရေးရာကိစ္စများ အများဆန္ဒအတိုင်း လက်ခံမည် သတင်း
■ ပါတီစာပေရေးရာများ စစ်အစိုးရကို မဝေဖန်ရ သတင်း
■ ကျီးလန့်စာစား မဖြစ်ကြရန် ပန်ဆန်း ဒေသခံလူထုအား ၀ အာဏာပိုင် ဟောပြော သတင်း
■ နယ်ခြားစောင့်တပ် လက်မခံကြောင်း မွန်ပြည်သစ် ထပ်မံဆုံးဖြတ် သတင်း
■ မွန်တပ်ဦးက ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်၊ မွန်ပါတီသစ်တခု ပေါ်ပေါက်ဖွယ်ရှိ သတင်း
■ ဘန်ကီမွန်း မြန်မာရွေးကောက်ပွဲကို စိတ်ပျက် သတင်း
■ တပ်မတော်နေ့ကြောင့် ဧည့်စာရင်းတိုင်မရ၍ ပြည်သူများ အခက်ကြုံ သတင်း
■ ကြိမ်ဒဏ်ပေးသည့် ဦးပိုင်အရာရှိအား အရေးယူ သတင်း
■ တောင်ပေါ်သား ကျန်းမာရေးအတွက် ဘတ် သန်း (၅ဝဝ) နီးပါး ထိုင်းက ထောက်ပံ့ သတင်း
■ တရားဝင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအား ထိုင်းနိုင်ငံသားများနည်းတူ ဆေးကုသခွင့်ပေးမည် သတင်း
■ တရုတ်အင်ဂျင်နီယာ (၆၀) ဖြင့် ဂတ်စ်ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းကို မဒေကျွန်း၌ စတင်လုပ်ကိုင်ပြီ သတင်း
■ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ မဖြူဖြူကို သတ်သူ တရားခံကို ဖမ်းဆီးပြီး တရားစွဲပြီ သတင်း
■ ခွဲခြင်း၊ ကွဲခြင်း မရှိတဲ့ တခုတည်းသော လူထုပါတီ - အန်အယ်လ်ဒီ ( ဦးဝင်းတင်နဲ့ စကားလက်ဆုံ)
■ တပ်မတော်သားများအတွက် ပြည်သူသာ အမိအဖ ဖြစ်စေလို (ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦး နှင့် အင်တာဗျူး)
■ တရားခံက တပ်မတော် (ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပြောခွင့်ရ ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်းနှင့် အင်တာဗျူး)
■ အကျပ်အတည်းကာလ NLD ခေါင်းဆောင် (၂) ဦး၏ အမြင်များ (အင်တာဗျူး)
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 8:31 AM ,0comments
တော်လှန်ရေးနေ့အကြို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်ဦးပန်ကြားချက်
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 8:08 AM ,0comments
ဒီတပတ် မြန်မာ့မျက်မှောက်ရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းမှာ ၀ါရင့် သတင်းစာဆရာကြီး လူထုဦးစိန်ဝင်း ကို ဦးကျော်ဇံသာ ဆက်သွယ်ပြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ ဒီလို အခြေအနေမှာ ဘာတွေလုပ်သင့်၊ သူ့ရဲ့ NLD နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အပေါ်ထားရှိတဲ့ အမြင်တွေကို ဆွေးနွေးသုံးသပ် တင်ပြထားပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို လူတော်တော်များများ လက်မခံကြပါဘူး။ ဒီတကြိမ်မှာ ၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ လူထုထောက်ခံမှု တခဲနက်ရခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ ဘယ်လို ဆုံးဖြတ် သင့်တယ်လို့ ဆရာထင်ပါသလဲ။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျနော့် အလုပ်မဟုတ်တဲ့ အတွက် ကျနော် မပြောနိုင်ပါဘူး။ ကျနော်က ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်သင့်တယ် ထင်သလဲဆိုတဲ့ အမေးကိုတော့ ဖြေလို့ရတယ်။ အနှစ် (၂၀) လုံးလုံး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို စောင့်ကြည့်လာတဲ့ လူတယောက် အနေနဲ့ အနှစ် (၂၀) လုံး NLD လုပ်ခဲ့တာက အစိုးရ စိတ်ဆိုးမယ့် ကိစ္စ၊ အစိုးရ မကြိုက်တဲ့ ကိစ္စတွေ သူဘာမှ မလုပ်ဘူး။ အစိုးရ လုပ်စေချင်တာဘဲ လုပ်မယ်ဆိုပြီး သူက ရပ်တည်ခဲ့တာ။ အဲဒါကြောင့် အခုလည်း အစိုးရ လုပ်စေချင်တဲ့ အတိုင်း သူ့ပါတီကို မှတ်ပုံတင်မယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆရာရဲ့ ယူဆချက်က ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ချင်ဘူးလို့ ထင်ပါသလား။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ ၀င်သင့်မ၀င်သင့်လို့ ကျနော်က မပြောချင်ဘူး။ ကျနော်မှာ သူကိုပြောပိုင်ခွင့် မရှိဘူး။ သတင်းသမား တယောက် အနေနဲ့က ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ သတင်းတွေပေါ်မှာ ကျနော်က ဝေဖန် သုံးသပ်တာဘဲ လုပ်နိုင်တယ်။ သူအနေနဲ့ ၀င်လိမ့်မယ်လို့ဘဲ ကျနော်က ပြောတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ လူတွေကိုလည်း ကျနော်က မှားတယ်၊ မှန်တယ်လို့ ကျနော်မှာ ပြောပိုင်ခွင့် မရှိဘူး။ ဒါလူတဦးချင်းစီရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်ခွင့် ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်က ဘယ်ပါတီကိုမှ ရွေးကောက်ပွဲဝင်လို့ အပြစ် မတင်ပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဒါပေမဲ့ ဆရာက NLD ကို စစ်အစိုးရ အကြိုက် လိုက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ ထောက်ပြ ဝေဖန်တယ်။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါက ကျနော်တို့ သတင်းသမားရဲ့ အလုပ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ စစ်အစိုးရက NLD ကို ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်စေချင်တယ်လို့ ထင်ပါသလား။ တကယ်တော့ NLD မ၀င်လေ ကောင်းလေ။ စစ်အစိုးရက သူတို့ လိုချင်တဲ့လူတွေက NLD မပါရင် နိုင်မယ်လို့ တမင် ဒီလို အကွက်ဆင်တယ်လို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ ကျနော်ကတော့ အဲဒီလို မယူဆဘူး။ NLD ကို အစိုးရ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ၀င်စေချင်တယ်လို့ ကျနော် ယူဆတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ အစိုးရက ဒီနေ့ အစိုးရက ပိုက်ဆံလည်း မလိုဘူး၊ ရာထူး အာဏာလည်း လက်ရှိဖြစ်တယ်။ သူမှာ upper hand စင်ပေါ်ကလူဘဲ။ သူလိုချင်တာ တခုပဲရှိတယ်။ Legitimacy ပဲ သူလိုချင်တယ်။ အဲဒီ တရားဝင် ဖြစ်တည်မှု legitimacy ရဖို့ အတွက်ဆိုရင် NLD ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ လိုပါတယ်။ NLD ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ဘူးဆိုရင် ကမ္ဘာတခုလုံးလည်း အသိအမှတ်ပြုကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူလိုချင်တဲ့ legitimacy ကို ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် အစိုးရကတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်စေချင်တယ်လို့ ကျနော်ယူဆပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ NLD ရွေးကောက်ပွဲဝင်လို့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲလို ပြန်လည်း အနိုင်ရခဲ့ရင် ဒီ ဖွဲ့စည်းပုံကို သူတို့ ပြုပြင်နိုင်စရာ အကြောင်း မရှိဘူးလား။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ မရှိဘူးခင်များ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ရေးဆွဲထားတာကိုက ဒီ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံကို ပြင်ချင်လို့ရှိရင် ၇၅% အထက် ထောက်ခံမှ ရမယ်။ စစ်တပ်က ၂၅% အမာခံ ရှိနေပြီဖြစ်တယ်။ တခြား သူ့ကို ထောက်ခံမယ့် ကြံဖွံ့တို့လို၊ သူရဲ့ cronies စီးပွားရေး သမားတွေကလည်း ၀င်အရွေးခံကြအုန်းမှာ ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ ပြင်ဆင်လို့ ရနိုင်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ နောက်တချက်က NLD ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရင်လည်း ကျနော်က နိုင်မယ်လို့ မထင်ဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဒီနေရာမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင် တကယ်တော့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အရှိန်အ၀ါနဲ့ အဓိက ရပ်တည်နေတယ် ဆိုရင် မှားမယ် မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ၀င်မယ်မ၀င်ဘူး ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောကြားသင့်တယ်လို့ ဆရာ မထင်ဘူးလား။ အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပါတီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လိုက်နာမယ် ဆိုတာကို ဆရာ ဘယ်လို ပြောလိုပါသလဲ။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ ကျနော်ကတော့ ဒီကိစ္စဟာ အင်မတန် သေရေးရှင်ရေး အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်တယ်။ ပါတီရဲ့ ရပ်တည်ရေး အတွက် နောက်ဆုံးအဆင့် ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ အပြည့်အ၀ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ကျနော်ကတော့ ယူဆတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ သူဆုံးဖြတ်မှ ဖြစ်မှာပါ။ သူ့ဆုံးဖြတ်ချက် မဟုတ်ဘဲနဲ့ ပါတီက ခေါင်းဆောင်တွေက ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ် ဆိုရင် NLD အောက်ခြေထု လူထုက လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ လက်ရှိ NLD ခေါင်းဆောင်မှုတွေကို ပြည်သူလူထုက လုံးဝ အယုံအကြည် မရှိတော့ပါဘူး။ တော်တော်လေး စိတ်ကုန် နေကြပါပြီ။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ ဟုတ်ပါတယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။ သူ ဆုံးဖြတ်မှ ပြည်သူလူထုက လက်ခံမှာ။ NLD အောက်ခြေတွေကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆုံးဖြတ်ချက် ဆိုရင်တော့ ဘာမဆို လက်ခံမှာဘဲ။ အခုရှိနေတဲ့ CEC (Central Executive Committee) တွေ၊ CC (Central Committee) တွေကို ပြည်သူလူထုက အယုံအကြည် မရှိပါဘူး။ NLD အောက်ခြေတွေကလည်း အယုံအကြည် မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လည်း မပြီးပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဒီတခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ သူမှာ ဘာအခက်အခဲတွေ ရှိနေလို့ သူကိုယ်တိုင် မဆုံးဖြတ်ဘဲ ပါတီက ဆုံးဖြတ်ပါလို့ ပြောသလဲ။ ဆရာ ဘယ်လိုတွက်ပါသလဲ။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ သူကတော့ ပါတီဝင် ကောင်းတယောက်အနေနဲ့ ပါတီအများစု ဆုံးဖြတ်တာကို နားခံမယ်ဆိုတဲ့ ပါတီဝင်ကောင်း တယောက်ရဲ့ ကျင့်ဝတ်ကို ပြချင်တာလို့ ကျနော်ယူဆပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စမှာတော့ ဒီလို လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ သူကိုယ်တိုင် အတိအကျဝင်ပြီး ဆုံးဖြတ်မှ ဖြစ်မှာပါ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်တို့ အရှေ့ကို နည်းနည်းမျှော်ကြည့်ရင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ဘူးဆိုရင် ပါတီက ဖျက်သိမ်းခံရမယ့် အခြေအနေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် က ပြည်သူကို ဘယ်လို ဦးဆောင်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေး ရှေ့တိုးအောင် လုပ်နိုင်မယ့် အလားအလာ ရှိပါသလဲ။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ ဗမာနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုမှာ အနှစ် (၂၀) ကာလမှာ NLD က မရှိသလိုပါဘဲ။ NLD ရှိနေတယ်လို့ကို ပြည်သူလူထုက မသိဘူး။ ပြည်တွင်းမှာ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ကျနော်တို့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတယ်၊ ကိုးကန့်တွေ အတိုက်ခံရတယ်။ ဒါလည်း NLD က သူနဲ့ မဆိုင်သလို နေတာဘဲ။ ခလေးစစ်သားတွေ မိဘရင်ခွင်က ခေါ်ပြီး စစ်သားတွေ လုပ်ခိုင်းတယ်။ ဒါကိုလည်း NLD က မသိသလို နေတာဘဲ။ လယ်သမားတွေရဲ့ လယ်တွေကို အသိမ်းခံရပြီးတော့ လယ်သမားတွေ ထောင်ကျတယ်။ ဒါကိုလည်း NLD က မသိသလို နေတာဘဲ။ အခုလည်း အလုပ်သမား ဆန္ဒပြပွဲတွေ ကိစ္စတွေလည်း NLD က သူနဲ့ မဆိုင်သလို နေတာဘဲ။ အဲဒီတော့ NLD ရှိခြင်း မရှိခြင်းက ဗမာနိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်မှာ အခုအချိန်မှာ ဘာမှ အရေးမပါတော့ပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်တို့ သတင်းသမားတွေ၊ မီဒီယာသမားတွေက NLD ရဲ့  လုပ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လူတချို့ရဲ့ ပြောကြားဝေဖန်မှုကို ထင်ဟပ်ပြီးတော့ အဲဒီလို ဖော်ပြတဲ့အခါတိုင်း ကျနော်တို့ကို တချို့က ပြန်ပြောကြပါတယ်။ NLD ရပ်တည်ရေး သိပ်အရေးကြီးတာကို ခင်များတို့ နားမလည်းဘူးလား၊ ဒီအချိန်မှာ ခင်များတို့ ဒီစကား ပြောရ ကောင်းမလားဆိုပြီး အမြဲတမ်း ဝေဖန်တာ ခံရပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန် ရှင်းပြသင့်ပါသလဲ။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ ကျနော် အခုနပြောသလိုပါဘဲ။ နိုင်ငံရေးမပါဘဲနဲ့ ရပ်တည်နေတယ် ဆိုတာ အသက်မရှိတဲ့ လူသေကောင်ကြီးပါဘဲ။ ဘာမှ မထူးပါဘူး။ အရေးကြီးတာက ရပ်တည်ဖို့ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေးဘဲ။ အခု အနှစ် (၂၀) အတွင်း NLD က ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး။ ကျနော် တလောက ပြောခဲ့သလို ပဲခူးက ဦးအေးမြင့်လို့ လူပုဂ္ဂိုလ် တဦးတယောက်လောက်တောင် NLD က တိုင်းပြည် အကျိုးကို မသယ်ပိုးခဲ့ပါဘူး။ နောက်တခါ မဖြူဖြူသင်း လို အမျိုးသမီး တယောက်လို လူတွေရဲ့ ဒုက္ခတွေကို ကယ်တင် ပေးခဲ့တာမျိုး မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် NLD က တည်ရှိနေတာကို ပြည်သူလူထုက သိကို မသိတော့ပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ NLD ကို တကယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်လို့ ဖျက်သိမ်းခံရရင် NLD ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ လုံးဝ ချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးလို့ ဆိုရမှာပေါ့။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ NLD ကတော့ ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး။ အခုလက်ရှိ ရှိနေတဲ့ CEC ဒီ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ ချုပ်ငြိမ်း သွားမှာဘဲ။ သူတို့ရဲ့ နိဂုံးဘဲ ဖြစ်သွားမယ်။ နိုင်ငံရေး ရှိနေသရွေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှိနေသရွေး ကာလပတ်လုံး NLD ကတော့ ရှိနေမှာဘဲ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ NLD နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့က ခွဲလို့မရပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဆက်လျက်ရှိနေမယ့် သဘောပေါ့။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော် ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ သဘောတူသည်ဖြစ်စေ မတူသည်ဖြစ်စေ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်မှတပါး ဒီနေ့ ဗမာပြည်သူ လူထုကို ဦးဆောင်နိုင်တဲ့လူ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှတပါး တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူလူထုကို ရင်ကြားစေ့အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လူ ဗမာပြည်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ တချို့က NLD သာ အဲဒီလို တရားဝင် ရပ်တည်ခွင့် မရတော့ရင် NLD အနေနဲ့ underground သွားရလိမ့်မယ်။ တနည်းအားဖြင့် လျှို့ဝှက်လုပ်ငန်းတွေ၊ မြေအောက် လုပ်ငန်းတွေနဲ့ လှုပ်ရှားရမယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စမှာ အကြမ်းဖက်တဲ့ ကိစ္စတွေများ ပါလာခဲ့ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကြမ်းမဖက် မူဝါဒနဲ့ လုံးဝဆန့်ကျင် နေတာပေါ့။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ NLD ကို အဲဒီလို ဇွတ်အတင်းမြေအောက် တွန်းပို့တဲ့ အပြောအဆိုမျိုးတွေ ကိုတော့ ကျနော်က ရှောင်ကြဉ် စေချင်တယ်။ ပါတီမှတ်ပုံတင် မရှိတာနဲ့ မြေအောက်ကို ရောက်သွားတာမျိုးက မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ၈၈ မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသားများ သူတို့မှာ ပါတီလည်း မရှိပါဘူး။ မရှိပေမယ့် သူတို့ဟာ တရားဝင် ရပ်တည်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်သွားကြတာပါဘဲ။ အဲဒီတော့ ပါတီ မှတ်ပုံမတင်တာနဲ့ မြေအောက်ရောက်သွား၊ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲလိမ့်မယ် ဆိုတာမျိုး မျှော်မှန်းတာမျိုးတွေ မပြောစေချင်ဘူး။ အဲဒါဆိုရင် ၁၉၄၇ ခုနှစ်က ကွန်မြူနစ်တွေကို ဖဆပလ ဆိုရှယ်လစ်တွေက တောထဲကို မောင်းထုတ် လိုက်သလိုမျိုး NLD ကို မောင်းထုတ်သလို ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 1:28 PM ,0comments
ဒေါ်စု ဘာတွေ ပြောခဲ့သလဲ
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို ထူထောင်ခဲ့တာဟာ ပြည်သူလူထု လိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှု အောင်မြင်ရေး အတွက် ထူထောင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်တယ်။ ပြည်သူလူထုနဲ့ ကျမတို့ တစည်းတရုံးထဲ မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင် ကျမတို့ အဖွဲ့ချုပ်ကြီးဟာ ဖျက်ဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်။ အဲဒီတော့ အဖွဲ့ဝင်များဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ သဘောထားကို နားလည်ရမယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ သဘောအတိုင်း လုပ်ရမယ်။(အဖွဲ့ချုပ်ရုံး၊ သထုံမြို့ ၁၄-၁၂-၈၈)
အဖွဲ့ချုပ် ရည်ရွယ်ချက်ကိုကလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ သက်သက်မှ မဟုတ်ဘဲ။ ၁၈ ရက် စက်တင်ဘာ စစ်အဏာသိမ်းပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ပြန့်ကြဲသွားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားတွေကို တစုတရုန်းတည်း ဖြစ်အောင် စုစည်းပြီး၊ အဲ့ဒီ စုစည်းထားတဲ့ အင်အားတွေကို စနစ်တကျ ဖြစ်အောင်ပေါင်းပြီးတော့ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပနိုင်မယ့် အခြေအနေမျိုးကို ဖန်တီးပေးဖို့ပါပဲ။ (အဖွဲ့ချုပ်ရုံး၊ ပုဂံမြို့ ၂-၁၁-၈၈)
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီး ABMA ဘလော့မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ " ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခြံထွက်ဗူးသီးနဲ့ ၂၀၁၀ " ဆိုတဲ့... ဖော်ပြပါ.. သတင်းမှန်ကန်ကြောင်း ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ခွင့်ရတဲ့နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ခြံထဲမှာစိုက်တဲ့ ခြံထွက်ဗူးသီး၊ သရက်သီးနဲ့ ကဒက်ချဉ်တို့ကို ဗဟိုအမျိုး သမီးအဖွဲ့ဝင်များ အတွက် လက်ဆောင် ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့... နောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က As Joke ဆိုပြီး ဗူးဆိုရင် ဖရုံ မသီးဘူး” ဆိုတဲ့ စကားကို ပြောလိုက်ပါသေးတယ်တဲ့ ဒါကြောင့် ဒီသတင်းဟာ မှန်ကန်ပါကြောင်း ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြန်လည် ပြောပြသွားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပေးလိုက်တဲ့ လက်ဆောင်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိတ်ဆွေ ဝေဒပညာရှင် တစ်ယောက်နဲ့ အမှတ်မထင် စကားစပ်မိရာမှာ ထိုဗေဒင်ပညာရှင် ယခုလို နိမိတ်ကောက် ပေးသွားပါတယ်... သူရဲ့ပြောစကား ကတော့ " ဆရာတို့ နိမိတ်ကောက်တဲ့ အမြင်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရိုးရိုးတန်းတန်း ပေးလိုက်တာပါပဲ.. ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ရိုးရိုးသာမာန် လူတစ်ယောက် မဟုတ်ပဲ ကမ္ဘာသိ လူထုခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် ဆိုတော့ နိမိတ်တွေနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။
အသံထွက် ဗူး(ဘူး)ဆိုထဲက ငြင်းပယ်တဲ့ ဆန်ကျင်တဲ့ လက္ခဏာဆောင်တယ်။ အားလုံး ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ငြင်းပယ်ကြလိမ့်မယ်။ နောက် သရက်နဲ့ သန်းရွှေက ထပ်တူကျနေတယ်။ နောက် ကဒက်ချဉ်မှာ အသံထွက် ကဒက်(ကတတ်)ဆိုတာ မြန်မာစကားမှာ ကတက်ဆိုတာ ခွေးကတက် ဆိုတာရှိတယ်.. လှေကားအောက်ခြေ ဖိနပ်ချွတ်တဲ့ နေရာပေါ့ .. ချဉ်ဆိုတာက မုန်းတဲ့ အသွင်ဆောင်တယ်။ ဒါကြောင့် အားလုံးကိုခြုံလိုက်ရင် ဗိုလ်သန်းရွှေလုပ်မယ့် ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ အားလုံးရဲ့ ငြင်းပယ်မှုကို ခံရနိုင်ပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း အားလုံးရဲ့ ချဉ်ဖတ်ဘဝကို ရောက်ပြီး လှေကားအောက် ခွေးကတက်ကို ရောက်မယ်။ တနည်း ခွေးကျကျမယ်လို့ ဆရာတော့ အဲ့လိုပဲ နိမိတ်အဖြစ်မြင်တယ် ... ဆရာကတော့ အသံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အသံထွက် နိမိတ်အမြင်ကို ပြောပြတာပါလို့" ပြောဆိုသွားပါတယ်။
“ဦးဝင်းတင်ဟာ သူနစ်နာ ခံစားနေရ တာတွေကို ပြောတာထက် သူတပါး နစ်နာ ခံစားနေ ရတာတွေကို ပိုပြောပြတယ်” ဟု ကုလသမဂ္ဂ အထူး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာပီညဲရိုးက သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တခုတွင် ပြောဖူးသည်။ ထိုအချက်သည်လည်း ဦးဝင်းတင်၏ “ဘာလဲဟဲ့ လူ့ငရဲ” တွင်လည်း ထင်ဟပ်နေသည်။
ဦးဝင်းတင်၏ လူ့ငရဲသည် ထောင်ကို ကြောက်ရွံ့ တွန့်သွားရေးမဟုတ်။ ထောင်ကို ထီမထင်ရေး၊ ထောင်မကြောက်ရေး ဖြစ်သည်။ “ထောင်ထဲက ထွက်လာခဲ့တယ်၊ အပြင်ရောက်တော့လည်း ထောင်ကိုပဲ ရောက်နေရ ပြန်ပါပကောလား၊ ထောင်ကြီးတာနဲ့ သေးတာပဲ ကွာတယ်”ဟု အနှစ် ၂၀ အကြာမှ ပြန်တွေ့ရသော အပြင်လောက မြန်မာပြည်ကြီးကို သုံးသပ်သည်။ တပြည်လုံး “ကိုကိုးကျွန်း” ဖြစ်နေပြီဟု မြင်သည်။
လူ့ငရဲကို ၁၉၈၉ ခုနှစ် အသက် ၆၀ အရွယ်တွင် ထောင်ထဲသို့ စဝင်သွားပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသော ခံစားမှု၊ တွေးတောမှု၊ စိတ်ပဋိပက္ခများမှ စထားသည်။ ငါဘယ်လို ပြုံးမလဲ၊ မုန်းမလဲ၊ ရုန်းမလဲ၊ ဝုန်းမလဲ၊ ဆုံးမလဲ၊ သုဉ်းမလဲ၊ ငါဘယ်လို ကြံမလဲ၊ ဖန်မလဲ၊ ခံမလဲ၊ လှန်မလဲ၊ ညံမလဲ၊ ထန်မလဲ၊ နှံမလဲဟု လူလုပ် ငရဲထဲသို့ ရောက်ပြီးနောက် မာန်တင်းသည်။ ရင်ကော့သည်။
စစ်ကြောရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်ပြောမနေချင်တော့ဟု ဦးဝင်းတင်က ပြည်ဖုံးကားချသည်။ “တိရစ္ဆာန်ထက် ပိုမို ရိုင်းပျရက်စက်၊ ကျင့်ပျက် ကြမ်းကြုတ်စွာ စစ်မေး ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ကြတယ်” ဟုသာ လိုရင်းတိုရှင်း သရုပ်ဖော်သည်။
လူထုအပေါ် ဥပဒေမဲ့ နှိပ်စက်ကလူ ပြုသူ အာဏာပိုင်များကို ဘယ်လို သဘောထားမည်လဲဟု ဆင်ခြင်သည်။ ရှစ်လေးလုံး ကာလ အတွင်းက ဦးနုပြောခဲ့သည့် ချေ ၂ ချေကို ဦးဝင်းတင်က ဆွဲထုတ်ပြသည်။ လက်စားချေနှင့် သင်ပုန်းချေ။ ဘယ်ချေကို လက်ခံကြမလဲဟု မေးခွန်းထုတ်သည်။
ရေရှည်တွင် စိတ်ခိုင်မာမှု ဦးမကျိုးစေရေးအတွက် မကျိုးပဲ့ရေးတရား သုံးပါးကို ချမှတ်သည်။ စိတ်ဓာတ် မကျိုးပဲ့စေနဲ့၊ ကျန်းမာရေး မကျိုးပဲ့စေနဲ့၊ စုဖွဲ့မှု မကျိုးပဲ့စေနဲ့။ ထောင်ကျနေခြင်းသည် အချိန် လေလွင့် ကုန်ဆုံးစေခြင်း မဟုတ်၊ “အရေးတော်ပုံတပ်သား”အဖြစ် အမှုထမ်းနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဦးဝင်းတင်က ယူဆသည်။ ခေတ်ဝန်ကိုထမ်း၍ ခေတ်လမ်းကို လျှောက်ခြင်းဟု သုံးသပ်သည်။
ထောင်တွင်း ပါတီစွဲ၊ အယူစွဲတွေ ကိုယ်စီရှိသည်။ ယင်းမှ ပေါ်ပေါက်လာသော အငြင်းပွားစရာ၊ သဘော မတူနိုင်သည်များကို လူမှုရေးအရ ခင်မင်အောင် ပြုပြီး အရင်ညှိရပုံကိုလည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် သိရသည်။ အကျဉ်းကျ နိုင်ငံရေး သမားများ၏ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ အယူအဆ ဆက်ဆံရေးကို မြင်ရသည်။
ထောင်ဘာသာဗေဒကိုလည်း ဦးဝင်းတင်က မလွတ်အောင် မှတ်တမ်းတင်သည်။ အကျဉ်းဦးစီး (အကစ) သည် အကြမ်းဖက် ဦးစီးဌာန၊ အူကြောင်ကြောင် ဦးစီးဌာန၊ အကျိုးရှာ ဦးစီးဌာန၊ အကုန်နှိုက် ဦးစီးဌာနဟူ၍ ဝိဂြိုဟ်ပြုထားသည်။
အကျဉ်းကျ နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ပြင်ပမှ မိသားစု၏ ရင်နာဖွယ် ဆက်ဆံရေးကိုလည်း မြင်ရသည်။ မိခင်၊ ဇနီး၊ အစ်မ၊ ညီမ၊ တူမ၊ သမီး စသည့် မျှဝေ ခံစားဘက်များကိုလည်း မလွတ်စေရ။ “နိုင်ငံရေး သယံဇာတ ရင်းမြစ်တွေ”ဟု ဦးဝင်းတင်က ဂုဏ်ပြုသည်။ အိမ်ထောင်သက် နှစ် ၄၀၊ ထောင်ဝင်စာ တွေ့ရသည်မှာလည်း နှစ် ၄၀ ဟု ပြောသော ဘိုးတော်ခင်ဝင်း၏ ဇနီး အကြောင်းလည်း ပါသည်။ အဖေကို မမြင်ဖူးသဖြင့် တွေ့သမျှ ထောင်ဝန်ထမ်းကို အဖေခေါ်မိသော သမီးလေးကို အမေဖြစ်သူက ရိုက်သည်။ အဖေအစစ်နှင့် တွေ့သောအခါ ထပ်ရိုက်မည်စိုး၍ အဖေဟု မခေါ်သည့် မိသားစု၏ အဖြစ်မှာလည်း ရင်နင့်စရာ ဖြစ်သည်။ မျှဝေ ခံစားဘက်များ မရှိလျှင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အဖို့ “တော်လှန်-မာန်-ဉာဏ်-သတ္တိ” များ ခမ်းခြောက် ပျောက်ဆုံးမည်ဟု ထောက်ပြသည်။
ဘီလ်ရစ်ချတ်ဆန်၊ ပါမောက္ခ ပီညဲရိုး နှင့် ကင်တာနားတို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ ကိုလည်း ထောင်တွင်း ဆင်းရဲဒုက္ခ လျှော့နည်းရေး အကျိုး မဖြစ်လာသဖြင့် ဦးဝင်းတင်က ထေ့ငေါ့သည်။ သူတို့မေးမြန်း ပြန်သွားပြီးနောက်လည်း ထမင်းသည် “ခွေးအန်ဖတ်” ဖြစ်မြဲ၊ ညဘက်တွင် ခြင်ကိုက်မြဲဟု သရော်သည်။ ထောင်ထဲတွင် စာမဖတ်၊ စာမရေး၊ သီချင်းမဆိုရ ပိတ်ပင်ထားသဖြင့် မျိုးဖြုတ် သတ်ဖြတ်မှု (Genocide) ကဲ့သို့ပင် အသိဉာဏ် မျိုးတုံးပြီး နလပိန်းတုံး ဖြစ်အောင် လုပ်နေမှု (Intelectocide) ဟု စကားသစ်တွင်၍ ဦးဝင်းတင်က ဘီလ်ရစ်ချတ်ဆန်ကို ပြောခဲ့သည်။
ထောင်ထဲတွင် တီဗီ၊ ကောဇောသွင်းပြီး ထောင်အာဏာပိုင်များနှင့် ထမင်းအတူစားသူ သူဌေးကြီး မောင်ဝိတ်၊ တိုင်းပြည် တိုးတက် စေချင်တယ် ဟု ပြောသော အာဏာရှင် ဦးနေဝင်း၏မြေး အေးနေဝင်း၊ အကုန်လုံး ဝင်ဆံ့အောင် ပေါင်းတတ်သော ဘိုးတော်ခင်ဝင်း၊ ဦးဝင်းတင်၏ ကဗျာကို ကြိုက်လှ၍ အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်ပြီး ထောင်ထဲတွင် ရွတ်ပြသူ ဒေါက်တာခင်ဇော်ဝင်း၊ ထောက်လှမ်းရေး နားရွက်ကို တံတွေးစွတ်သော ထောင်ဖောက်ဟီးရိုး မြင့်အောင်၊ ထောင်ကျော်ပြေးသော ကျွဲကြီးမှသည် ထောင်ဆေးရုံတွင် ဟင်းချက်ရောင်းသော အကျဉ်းသား တိုနီခါးအထိ သူမြင်ရသလောက်ကို ဦးဝင်းတင်က ရေးပြသည်။
ထောင်တွင်း အလုပ်ခိုင်းမှုများကို “အလုပ်ဆိုနိုး ဘုတ်ဆိုနိုး”ဟု အာခံခဲ့သည်။ “နိုးသံခြေကျင်း နိုးထမင်း” ဟုလည်း ဆန့်ကျင် ခဲ့ကြသည်။ ထောင်အာဏာပိုင်များ ဘာပြောပြော ဟားတိုက်ရယ်သည့် “ဟားတိုက်ပွဲ” လုပ်သည့် တရုတ် လူငယ်တယောက် အစ ပျောက်သွားပုံကိုလည်း မှတ်တမ်း တင်ထားသည်။
ထောင်တွင်း လက်ရေးစာစောင်များ ဖြန့်ကြသည်။ “ကြက်တူရွေး”ဟု နာမည်ဝှက် ပေးထားသော ရေဒီယိုများ ခိုးသွင်းကြသည်။ ထောင်တွင်း အခွင့်အရေး ချိုးဖောက် ခံရမှုများကို စာမျက်နှာ ၁၀၀ ခန့်ပါ အစီရင်ခံစာရေးပြီး အပြင်သို့ ထုတ်ကြသည်။ ထောင်တွင်း နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများကို ရင်တမမ ဖတ်ရသည်။
ကဗျာများကလည်း မာကြောမှုကို ထင်ဟပ်နေသည်။ ၁၉၉၀ တွင် ကဗျာရှည်ကြီးများ ရေးခဲ့သည်။ ကဗျာ ပြဇာတ် ရှည်ကြီးများလည်း ပါသည်။ ကဗျာရှည်ကြီးများကို လနှင့်ချီ၍ အခန်းနီးချင်းများကို ရွတ်ဆိုပြခဲ့သည်။ “ယမမင်း ငါ” ကဗျာတွင် ငရဲကို အာဏာရှင်များအတွက် တထပ်တိုး၍ ငရဲကြီးကိုးထပ် လုပ်ခဲ့သည်။ “ကိုးထပ်ငရဲကို ဂျိုးမကပ်တဲ့ အိုး (Tefloncoated) လုပ်မယ်” ဟု ကြိမ်းဝါးသည်။
ထောင်မှတ်တမ်း နိဂုံးမသတ်မီ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ကန့်ကွက်ကြောင်း၊ ရွှေဂုံတိုင် ကြေညာစာတမ်းကို ဆက်လက် ဆုပ်ကိုင်ကြောင်း ဦးဝင်တင်က ထည့်ရေးထားသေးသည်။ “စစ်ကျွန်ခေတ်တွင် လူရာမဝင်လို” ဟု စိတ်ပျက်စကား ဆိုသည်။
ကျနော်တို့ စာနယ်ဇင်းသမား ပေါက်စ ဖြစ်စဉ် ဝါရင့် အယ်ဒီတာကြီးများက ဦးဝင်းတင် ဘာသာပြန်သော “ကွိ” ကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ဟု တိုက်တွန်းကြသည်။ “ကွိ” သည် ကျင့်ဝတ်ကို အလေးအမြတ်ထားသော သတင်းစာသမား တယောက် အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ယခုလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးသမား လုပ်ချင်လျှင် ဦးဝင်းတင်၏ ခေတ်သစ် ထောင်ဋီကာ ဖြစ်သော “ဘာလဲဟဲ့ လူ့ငရဲ” ကို ဖတ်ဟု ဆိုကြပါလိမ့်မည်။ ။
အရှေ့အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ရေးရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာ့တ်ကမ်းဘဲလ်သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် အမေရိကန် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားခဲ့သည်။ ၁၄ နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံး အကြိမ် လာရောက်သော အမေရိကန် အဆင့်မြင့် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များအပြင် ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်နှင့်လည်း တွေ့ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
မေး။ ။ မြန်မာစစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့တယ်။ အဲဒီ ဥပဒေအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် အများ ယုံကြည်လေးစားတဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် အတော်များများနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော်ဟာ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ ဒီအပေါ်မှာ အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ တုံ့ပြန်မှုက ဘယ်လိုပါလဲ။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော်ကို နိုင်ငံရေး ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကနေ ဖယ်ထုတ်ထားတာမို့ နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေကို ကျနော်တို့ အရမ်း စိတ်ပျက်မိပါတယ်။ ဒီဥပဒေက NLD ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရွေးကောက်ပွဲမှာ မပါနိုင်အောင် တားမြစ် ထားတာကြောင့်လည်း စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ်။ ဥပဒေအရ သူ့ပါတီမှာ သူ ပါတီဝင် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ ဒီလို ဥပဒေ ထုတ်ပြန်တာဟာ လမ်းကြောင်းအမှားကို ဦးတည်စေတဲ့ ခြေလှမ်း တလှမ်းပါပဲ။ ဒီဥပဒေတွေက မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ပြီးသား အခြေအနေကို ပိုပြီး ဆိုးရွားစေပါတယ်။
မေး။ ။ အဓိက အတိုက်အခံပါတီ ဖြစ်တဲ့ NLD နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မပါဘဲ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်ဆိုရင် အဲဒီ ရွေးကောက်ပွဲကို အများက ယုံကြည် လက်ခံလိမ့်မယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရေး မ၀င်ရေးဟာ သူနဲ့ သူ့ပါတီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတိုက်အခံနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေက ချမှတ်မယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်း ကျနော်တို့ အလေးထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ သဘောထားက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အခြားအတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်တွေ အပါအ၀င် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းတွေအားလုံး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး မ၀င်ရေး သူတို့ဘာသာ ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း ရှိဖို့ပါပဲ။ စစ်အစိုးရအနေနဲ့ သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်တဲ့ သူတွေကို ရွေးကောက်ပွဲကနေ တားမြစ် ဖယ်ထုတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေ မချမှတ်သင့်ပါဘူး။ အခု ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေကတော့ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်စဉ်ကို မထီလေးစားပြု သလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီဥပဒေကြောင့် လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာလည်း အများရဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချမှု ကင်းမဲ့နေပါ လိမ့်မယ်။
မေး။ ။ စစ်အစိုးရနဲ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းတာ အောင်မြင်မှု မရှိဘူးလို့ ဘန်ကောက် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တခုမှာ မစ္စတာ ကမ်းဘဲလ် ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ တကယ်ပဲ မှန်တယ်ဆိုရင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့ စစ်အစိုးရကို စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှုတွေ တိုးမြှင့်သွားဖို့ ရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။ ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှုတွေဟာ အမေရိကန်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မူဝါဒဘောင်ထဲက အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တခုဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူသိရှင်ကြား ကျနော်တို့ ထုတ်ပြောပြီးပါပြီ။ ပြီးတော့ စစ်အစိုးရကိုလည်း တကယ်လို့ အခြေအနေက တောင်းဆိုလာခဲ့ရင် ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှုတွေ တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်သွားမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ကျနော်တို့ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပြောထားပါတယ်။
ကျနော်တို့ စစ်အစိုးရနဲ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွေကို ဆက်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှုဆိုတာက တဦး တယောက်ရဲ့ အကျိုးစီးပွား အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်အစိုးရနဲ့ ဆက်စပ် ဆောင်ရွက်မှုဟာ ရေရှည်လုပ်ရမယ့် ခက်ခဲတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် တခုမှန်း အစကတည်းက ကျနော်တို့ သိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီနှစ်လို ရွေးကောက်ပွဲ အခင်းအကျင်းနဲ့ဆိုရင် ပိုပြီးတော့တောင် ခက်ခဲ နိုင်ပါသေးတယ်။ အခုလောလောဆယ် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့မှာ အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် စစ်အစိုးရနဲ့ ထပ်မံ တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ လမ်းဖွင့်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်ကို နောက်တခေါက် ထပ်သွားနိုင်ဖို့ အတွက်လည်း စစ်အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေး နေပါတယ်။
မေး။ ။ စစ်အစိုးရဟာ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုကို အဆင့်မြှင့်ဖို့နဲ့ တရားဝင်လုပ်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာရဲ့ သဘောထား အမြင်တွေကို အသုံးချတဲ့ နေရာမှာ ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ လူသိများပါတယ်။ စစ်အစိုးရအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပခင်မှာ အတိုက်အခံနဲ့ သေသေချာချာ စကားပြောနိုင်ဖို့ ဘယ်လို လက်တွေ့ကျတဲ့ နည်းတွေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို တိုက်တွန်းနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အဖြစ် ရှိနေသေးတာကတော့ စစ်အစိုးအရက အတိုက်အခံနဲ့ တိုင်းရင်းသား အင်အားစု တွေအပါအ၀င် သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ အမှန်တကယ် တွေ့ဆုံ စကားပြောမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို ရောက်ဖို့ လူသိရှင်ကြား ဖြစ်စေ၊ သီးသန့်ဖြစ်စေ စစ်အစိုးရကို ကျနော်တို့ တိုက်တွန်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာလည်း မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိအောင် ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။
မေး။ ။ တစတစ တိုးမြင့်လာနေတဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားနဲ့ မြန်မာ ဆက်ဆံရေးကိစ္စ၊ ပြီးတော့ မြောက်ကိုးရီးယား နိုင်ငံကနေ မြန်မာ နိုင်ငံကို နျူကလီးယား နည်းပညာတွေ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မှုတွေ အတော်လေး ရှိနေကြ ပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေက ဒေသတွင်းမှာ မတည်ငြိမ်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မစ္စတာ ကမ်းဘဲလ် အနေနဲ့လည်း ဒီကိစ္စကို စစ်အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဆီက ဘယ်လို အာမခံချက်မျိုး ရရှိခဲ့ပါသလဲ။ နျူကလီးယား နည်းပညာ လွှဲပြောင်းမှု သဘော သဘာဝနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစီရင်ခံစာပါ တချို့အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဆွေးနွေးပေးနိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ မြန်မာ-မြောက်ကိုရီးယား ဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မနှစ်က မီဒီယာတွေကနေ အစီရင်ခံစာ အတော်များများ ထွက်လာ တာကို ကျနော်တို့ သိပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် ၁၈၇၄ (United Nations Security Council Resolution – UNSCR 1874) အတိုင်း လိုက်ပါ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ဖို့ လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတိုင်းမှာ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ် ချက် ၁၇၁၈ နဲ့ ၁၈၇၄ အတိုင်း အပြည့်အ၀နဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အကောင်းအထည်ဖော်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ စစ်အစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို ကျနော်တို့ သတိပေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးက လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် ၁၇၁၈ နဲ့ ၁၈၇၄ ပါ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ရမယ့် ကိစ္စရပ်တွေကို လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိအောင် ဆောင်ရွက်ကြ လိမ့်မယ်လို့လည်း ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မေး။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေနဲ့ ဖြစ်စေ အာဆီယံ တခုလုံးနဲ့ ဖြစ်စေ စေ့စပ် ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဘယ်လို အတားအဆီးမျိုး ဖြစ်စေပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ မြန်မာပြည် ပြဿနာက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အတွက်ရော အာဆီယံ အဖွဲ့အစည်းတွက်ပါ စိန်ခေါ်ချက် တခုဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က အာဆီယံနဲ့ ဒီထက် ပိုနက်ရှိုင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ဖို့ ရည်ရွည်ထားပြီး ဖြစ်တာမို့ မြန်မာ ပြည် ပြဿနာက ကျနော်တို့နဲ့ အာဆီယံ ဆက်ဆံရေးမှာ အဟန့်အတား ဖြစ်တာမျိုးကို အဖြစ်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာစစ်အစိုးရကို နိုင်ငံတွင်းမှာ စစ်မှန်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာအောင် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဖိအားပေးရာမှာ အာဆီယံဟာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်တို့
မေး။ ။ မစ္စတာ ကမ်းဘဲလ် အနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး၊ လွတ်မြောက်မှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေ အတွက် လှုပ်ရှားနေသူတွေ ဘက်မှာ အမြဲတမ်း ရပ်တည်နေတယ် ဆိုတာကို ဒေသတွင်းက လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တွေသိအောင် မီဒီယာတွေမှာ ပြောတာတွေ အပြင် အခြား ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ အသိပေးပါမလဲ။
ဖြေ။ ။ လူ့အခွင့်အရေး၊ လွတ်မြောက်မှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးတွေဘက်က ရပ်တည်ရေးဟာ ကျနော်တို့ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒရဲ့ အခရာ အဖြစ် ရှိခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ကျနော်တို့ အဲဒီအတိုင်းပဲ ဆက်လက် ရပ်တည်သွားမှာပါ။
မေး။ ။ ထိုင်းနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာ သက်ဆင်ကို ထောက်ခံတဲ့ အင်္ကျီအနီဝတ်တွေ ဦးဆောင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ဖြစ်နေတာကြောင့် ချုလာလောင်ကွန်း တက္ကသိုလ်မှာ မစ္စတာ ကမ်းဘဲလ် စကားပြောမယ့် အစီအစဉ်ကို ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး မတည် မငြိမ်ဖြစ်နေမှုအပေါ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ လက်ရှိအခြေအနေကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်မှုတွေကို အကြမ်းဖက် ဖြေရှင်းတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့အစည်းတွေကနေ တဆင့် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့ ယူဆပါတယ်။ သင့်တော်တဲ့ ထိန်းချုပ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်း ကျနော်တို့ ထိုင်းအစိုးရကို အားပေး တိုက်တွန်း ထားပါတယ်။
မေး။ ။ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတွေဟာ မြန်မာပြည်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ဆက်ရှိနေကြပါတယ်။ ဂျပန်က မြန်မာနိုင်ငံကို အများဆုံးလှူတဲ့ အလှူရှင်နိုင်ငံတခု ဖြစ်ပြီး တရုတ်ကတော့ စီးပွားရေးအရ အင်အားကြီးလာတဲ့ နိုင်ငံပါ။ အိန္ဒိယကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အဖိနှိပ်ဆုံး အစိုးရတရပ်ကို ဆက်ပြီး ထောက်ခံ အားပေးနေကြပါတယ်။ အဲဒီ နိုင်ငံတွေကို ဘာများ ပြောချင်ပါသလဲ။ ပြီးတော့ မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ဆီက လေးနက်တဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေရော ရပါရဲ့လား။
ဖြေ။ ။ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် အတူထားပြီး လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ နေရာမှာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ဂျပန်၊ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အခြား နိုင်ငံတွေနဲ့ပါ ခိုင်မာတဲ့ ဆက်ဆံရေး ထားရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ ကျနော်တို့ တန်ဖိုး ထားပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ တာဝန်သိသိ ပါဝင်လာနိုင်ဖို့ အတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို ဖိအားပေးနိုင်ဖို့ အာဆီယံ၊ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်စပ် ဆောင်ရွက်မှုတွေကို ကျနော်တို့ တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ မြန်မာပြည်ကို ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားပြီး ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုအဖြစ် မြင်တွေ့လိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူလူထု၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ဘာများ ပြောချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ပြည်သူလူထုရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ငြိမ်းချမ်း သာယာဝပြောပြီး ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်လာရေးကို ကျနော်တို့ ထောက်ခံအားပေးပါတယ်။ ကျနော်တို့မူဝါဒက ဒီရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကို ဆက်လက် ထောက်ခံအားပေး ဖို့နဲ့ အဲဒီ ရည်မှန်းချက် ရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ကြသူတွေကိုလည်း ဆက်လက် ထောက်ခံအားပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ အများနည်းတူ အခွင့်အရေးတွေ ရသင့်ပါတယ်။
မေး။ ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ပိုပြီး ခင်မင်နီးကပ်တဲ့ ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက် လိုကြတဲ့ တပ်မှူး တွေနဲ့ အစိုးရ အရာရှိတွေ ကိုရော ဘာများ ပြောချင်ပါသေးသလဲ။
ဖြေ။ ။ အစိုးရပိုင်းနဲ့ တပ်မတော်ထဲက သူတွေကို ပြောလိုတာကတော့ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အတိုက်အခံ ပြုနေသူတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ပြောချင်တာနဲ့ အတူတူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ငြိမ်းချမ်း သာယာဝပြောပြီး ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံတခုအဖြစ် မြင်တွေ့လိုပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ ရည်မှန်းချက် ရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ကြသူတွေနဲ့လည်း ကျနော်တို့ အတူ ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
နေ့စဉ်သတင်းများ ( ၂၅ - ၃ - ၁၀ )
■ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဝေဖန်ချက်ကို တိုင်းရင်းသားပါတီများ ထောက်ခံ သတင်း
■ အဖွဲ့ချုပ် ဘိုကလေးမြို့နယ်ရုံး ပြန်ဖွင့်၊ မှတ်ပုံမတင်ရန် သဘောထားရှိ သတင်း
■ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်နိုင် သတင်း
■ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆုိ့ရေး တိုးမြှင့်ရန် တောင်းဆိုမည်ဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦး ပြောကြား သတင်း
■ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ပိုမိုဖိအားပေးသွားမည်ဟု ဘယ်လ်ဂျီယံ လွှတ်တော်အမတ် ပြော သတင်း
■ မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲ လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် သဘောထားကွဲ သတင်း
■ မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိစ္စ ကုလနှင့် မြန်မာ့မိတ်ဆွေများ ဆွေးနွေးမည် သတင်း
■ အာဆီယံဒေသ စစ်ရေးခေါင်းဆောင်များ ဗီယက်နမ်တွင် ဆွေးနွေး သတင်း
■ NLD ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရေး မဝင်ရေး မဲဆန္ဒရှင်များ သဘောထားကွဲလွဲ သတင်း
■ ၀ ဒေသ စစ်ရေးစိုးရိမ်မှုဖြစ် သတင်း
■ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပါတီများ လှုပ်ရှားမှု သတင်း
■ အဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူများကို နိုင်ငံခြားသံတမန်များ တွေ့ဆုံ သတင်း
■ မန္တလေးက နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူနှစ်ဦး သက်သေမခိုင်လုံဘဲ ထောင်ဒဏ်ချမှတ် သတင်း
■ အဖွဲ့ချုပ်ကို သံဃာ့ဥသျှောင်ဆရာတော် တိုက်တွန်းစာ ပေးပို့ သတင်း
■ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် အာမခံ ကျပ်ငါးသိန်းဟု သတ်မှတ်ထား၍ ... သတင်း
■ မောင်တောခရိုင် ဥက္ကဌ အလုပ်မှ အဖြုတ်ခံရ သတင်း
■ မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ရေး ထပ်မံဆုံးဖြတ် သတင်း
■ ဒေါက်တာဝင့်သူတို့အမှု ပြင်ဆင်ခွင့် အယူခံတင် သတင်း
■ မုန်တိုင်းသင့်ဒေသ လူ (၂) သိန်းခန့် သောက်သုံးရေ အခက်အခဲဖြစ် သတင်း
■ ပွဲစားကုမ္ပဏီ လိမ်၍ အလုပ်သမားများ ဒုက္ခဖြစ် သတင်း
■ နာမည်ပျက် စာရင်းဝင်များ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရရန် ပိုခက်မည် သတင်း
■ လူမှုရေးဂုဏ်ပြုဆု ပြည်ပရောက် မြန်မာတို့ စီစဉ် သတင်း
■ နည်းပြ မျိုးလှိုင်ဝင်းအား ဒဏ်ငွေ (၅) သိန်းတပ် သတင်း
■ မြန်မာအလုပ်သမား (၁၀၀ ) ကျော် ဘတ် (၆) သိန်းခန့် ငွေလိမ်ခံရ သတင်း
■ လင်မယားနှစ်ဦးကို ဓားထိုးသတ်ခဲ့သူ တရားခံကို ဖမ်းဆီးရမိ သတင်း
■ နောက်လမှာ ဟွန်ဆန် ထိုင်းကို သွားလည်မယ် သတင်း
■ ကမ္ဗောဒီးယားက နယ်စပ်မှာ ထိုင်း (၈၈) ယောက်ကို သတ် သတင်း
■ ဆော်ဒီအာရေဗျမှာ လက်နက်ကိုင်အများအပြား ထိန်းသိမ်း သတင်း
■ ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ (အင်တာဗျူး)
■ ဓူဝံကြယ်ပမာ ရှိနေမည် (ဆောင်းပါး)
■ ကိုယ့်ထောင်ချောက်ထဲ ကိုယ်မိနေတဲ့ နအဖ (ဆောင်းပါး)
■ ဘာကိုရွေးမယ့် ရွေးကောက်ပွဲလဲ (ဆောင်းပါး)
■ အော်ဝဲလ်တစ္ဆေ မြန်မာပြည်ကို ခြောက်လှန့်နေ (ဆောင်းပါး)
■ ဝါးအစည်းပြေသလို မဖြစ်စေချင်ပါ (ဆောင်းပါး)
Burma Update - March 25, 2010
NLD REQUESTS ILO TO HELP SOLVE WORKERS' CRISIS IN BURMA - 24 March 2010
(၂၃-၃-၂၀၁၀)နေ့ နေ့လည်ပိုင်းက NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် လည်းဖြစ် အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ပြီး NLD ရဲ့ပြောရေး ဆိုခွင့် ရှိသူလည်းဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းဟာ ရှေ့နေကြီး ဦးကြည်ဝင်းနှင့်အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်သို့ သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ဦးဉာဏ်ဝင်းတို့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် (၃) နာရီခန့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး NLD ရုံးကို ညနေ(၄)နာရီကျော်မှာ ပြန်လည် ရောက်ရှိ ခဲ့ပါတယ်။
NLD ရုံးမှာ သတင်းထောက်အ ချို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏ သဘောထားများကို ပြန်လည် ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နအဖ ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ရေး ဥပဒေနှင့် ရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေများအပေါ် ဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပြီး NLD ပါတီအနေနဲ့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး ကိစ္စများရပ်အပေါ် (၂၉.၃.၂၀၁၀)နေ့မှာ ပြုလုပ်မယ့် ဗဟိုဦးစီး အစည်းအဝေးမှာ ဒီမိုကရေစီ နည်းကျကျ ဆုံးဖြတ်ကြဖို့ သဘောထား ပေးခဲ့ပါသည်။
ထူးခြားတာကတော့ အဲဒီနေ့မှာပဲ… ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းမှ တဆင့် ဗဟိုအမျိုးသမီး အဖွဲ့ဝင်များ အတွက် သူမ၏ ခြံထွက် ဗူးသီးကြီး တလုံးကိုပါ လက်ဆောင် ပေးလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီလို ပေးလိုက်ခြင်းအပေါ် ဗဟိုအမျိုး သမီးအဖွဲ့က “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လက်ဆောင်ဟာ “ဗူးဆိုရင် ဖရုံ မသီးဘူး”ဆို တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနဲ့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေး ဥပဒေအပါအဝင် ကော်မရှင် ဥပဒေများကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ကြောင်းနှင့် ၎င်း ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း မဝင်ဘူး၊ ပါတီကိုလည်း မှတ်ပုံမတင်ဘူးဆိုတာ ပြတ်ပြတ်သားသား ပဲ ပြောဆိုလိုက်တာပဲ” လို့ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူကြပြီး အားလုံး ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်နေကြတယ်လို့ ခိုင်လုံ တိကျသော သတင်းရပ်ကွက်မှ ကြားသိရပါသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီဟာ မကြုံစဖူးစမ်းသပ်မှုတရပ်ကို ဖြတ်သန်းနေရပါတယ်။ ဒါကို ကျန်တဲ့ မိတ်ဖက် ပါတီတွေက သံယောဇဉ် ကြီးစွာနဲ့ စောင့်ကြည့် နေကြပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း တခြား ပါတီအတွင်းရေးကို ဝင်မပြောသင့်တာမို့ နှုတ်ကို တင်းတင်းစေ့ပြီး အကောင်းဆုံး အဖြေ ထွက်လာပါစေလို့ပဲ အောက်မေ့ နေကြပါတယ်။
စိတ်ရင်းဖြောင့်မှန်တဲ့၊ နိုင်ငံရေးအရ ရိုးသားတဲ့၊ အမြော်အမြင်ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အင်အားစုတွေဟာ ဒီချုပ်ရဲ့ အနေအထားကို စာနာ သဘောပေါက် ကြပါတယ်။ အလားတူပဲ ဒီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဇလားထဲ သွန်းလောင်းသလို ဆန္ဒမဲတွေ ပုံလောင်းခဲ့၊ အောခဲ့ကြတဲ့ ပြည်သူ လူထုကလည်း စိုးရိမ်ကြီးစွာနဲ့ စောင့်ကြည့် နေကြပါတယ်။ ဒီချုပ်အနေနဲ့ ဒီတကွေ့ကို ချောမွေ့စွာ ဖြတ်သန်း နိုင်ပါစေလို့ပဲ အားလုံးက ဆန္ဒပြုနေကြတာပါ။
ဒါပေမယ့် ဆန္ဒဆိုတာဟာ လက်တွေ့ မဖြစ်သေးတဲ့ဟာကို ခေါ်တာပါ။
လောလောဆယ် လက်တွေ့မှာ တွေ့မြင်နေရတာ တခုကတော့ နအဖ ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ တဝက်တပျက် အောင်မြင်ပွဲမျိုးကို လက်မခံနိုင်ဘူး ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် စေ့စပ်တယ်၊ ပြေအေးတယ် ဆိုတဲ့ အဖြေမျိုး၊ ရလဒ်မျိုး၊ ခုခေတ်မှာ အပြောများနေတဲ့ win-win နှစ်ဖက်နိုင် အဖြေမျိုးကို သူတို့က လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ သူတို့ကချည်းနိုင်မှ၊ တဖက်ကို အလဲထိုးနိုင်တဲ့ အဖြေမျိုး၊ ရလဒ်မျိုးပဲ ရချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်တယ်၊ စကားပြောကြတယ် ဆိုရင် ကြိုတင် စည်းကမ်း သတ်မှတ်တာ (pre-condition) ကို ဘယ်တော့မှ လက်မခံပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ထောက်ပြစရာ ရှိတာက ဒီ ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ သူတို့အပေါ် ကြိုတင် စည်းကမ်း သတ်မှတ်တာကိုသာ မကြိုက်တာ၊ သူများတွေ အပေါ်တော့ အမြဲ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ နှောင်တုပ်ပြီးမှ ဆက်ဆံတာပါ။ သူတို့ဟာ တဖက်သားဆီက ဘယ်တော့မဆို အကြွင်းမဲ့ လက်နက်ချတာ (unconditional surrender) ကိုပဲ လိုချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတခါ သူတို့ ထုတ်ပြန်လာတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေ ကြည့်ရင် အဲဒီလို သဘောထားတွေကို မမြင်ချင်အဆုံး တွေ့ရပါမယ်။ စစ်အုပ်စု လိုလားတဲ့ စေ့စပ်မှု ဆိုတာဟာ ၁၉၅၈ ခုနှစ် အာဏာ သိမ်းပွဲတုန်းက ဦးနုဆီကို အာဏာ သွားတောင်းတော့ ဦးနုက“စေ့စပ်” ပြီး အာဏာ လွှဲပေးလိုက်တာမျိုး၊ တပ်နဲ့လက်နက်တွေ အပ်ပြီး သံအမတ်ရာထူး လက်ခံတဲ့ စေ့စပ်မှုမျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို “ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြုပြင်သွားဖို့” စေ့စပ်တာမျိုးကို မလုပ်ရေးချ မလုပ်ဆိုတာ သံသယ ဖြစ်စရာ မရှိပါဘူး။
မြန်မာပြည်သမိုင်းမှာ စစ်အုပ်စုက ဖြိုခွဲလို့ပြိုကွဲခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ များလှပါပြီ။ ဖဆပလ အဖွဲ့ကြီး ကွဲရာမှာ တပ်ထဲက ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ ခြေရာလက်ရာတွေ မကင်းသလို တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေ (လက်နက်ကိုင်သူရော လက်နက် မကိုင်သူတွေအပါ)၊ လူထုလူတန်းစား အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ သံဃာတော်တွေ၊ ရေးရရင် စာရင်းက ကုန်နိုင်ဖွယ်ရာ မရှိပါဘူး။ အထဲမှာ သူ့လူတွေ ထည့်ပြီးဖြိုခွဲတာ၊ အပြင်ကနေ ဖိအားပေး ခြိမ်းခြောက်ပြီးဖြိုခွဲတာ၊ နည်းမျိုးတွေစုံလို့ပါပဲ။ ဒီအထဲက အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို ဖြိုခွဲဖို့ လုပ်ခဲ့တာဆိုရင် စတင် တည်ထောင်ကတည်းက စခဲ့တယ်လို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဗိုလ်အောင်ကြီးလို ပထမမျိုးဆက် စစ်အုပ်စု ဝင်ဟောင်းတွေကနေ ‘တတ်သိ’ တွေကို ဖယ်ရှားဖြိုခွဲတာလည်း ဖြတ်သန်းခဲ့ရ၊ အခုလို ဥပဒေနဲ့ အကျပ်ကိုင် ဖြိုခွဲတာလည်း ကြုံရလို့ မှတ်တမ်း တင်ရပါတော့မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတခါ နအဖရဲ့ လုပ်ရပ်ကတော့ အားလုံးထဲမှာ အဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ပြောရပါမယ်။ ဒီတချီမှာတော့ သူတို့ဟာ မသိမသာ၊ လက်သည်မပေါ်အောင် သပ်လျှိုတာ၊ ဖြိုခွဲတာ မဟုတ်တော့ဘဲ ပြောင် ကမ္ဘာသိ လုပ်တော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို နအဖ စစ်အုပ်စုဟာ ဖြိုခွဲရေး စီမံကိန်းကနေ ဖျက်သိမ်းရေး စီမံကိန်းဆီ လှမ်းတက်တဲ့ ခြေလှမ်းလို့ ဆိုရပါတော့မယ်။
ဒီလိုတဖက်မှာ ဖိနှိပ်မှုတွေပြင်းလာ၊ တဖက်မှာတော့ အမတ်ဖြစ်မယ်၊ ဝန်ကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ မြှူဆွယ်မှုတွေ များလာနေတဲ့ အခြေအနေ အောက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာတာနဲ့အမျှ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှာ ခြံကူးတာ၊ ဘက်ပြောင်းတာတွေ၊ ပင်ကိုယ် အသွေးအရောင်ကို ဖော်ပြလာတာတွေ၊ အမျိုးမျိုး စတွေ့လာနေရပါပြီ။ ဒီအကွေ့မှာ ရှိပ်စပီးယားရဲ့ ဂျူးလိယက်စ်ဆီဇာ ပြဇာတ် ထဲကလို “ဘရူးတပ်စ်-မင်းလဲပါသကိုး” ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်မထားတဲ့ သစ္စာဖောက်တွေကို တွေ့ရရင်လည်း အံ့သြစရာ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီတပွဲမှာ သူ့စည်း ကိုယ့်စည်း ခွဲဖို့ဟာ အင်မတန်မှ အရေးကြီးလှပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ ကိုယ့်အင်အားကို ကြီးသထက် ကြီးအောင်လုပ်၊ သူ့အင်အားကို သေးသထက်သေးအောင် လုပ်ရမယ့်အချိန် ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုလည်း ဘယ်သူမှ ငြင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြားထားသင့်တဲ့ လူကိုကြားထား၊ ဥပက္ခာပြုသင့်တဲ့ လူကိုဥပက္ခာပြု လုပ်ရပါမယ်။ အားလုံးကို နအဖဘက်ချည်း တွန်းပို့ပေးတာ မလုပ်သင့်ဘူး ထင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ သူနဲ့ကိုယ်လို့ပြောတာဟာ နအဖနဲ့ပြည်သူကိုပြောတာဖြစ်ကြောင်း ထပ်ပြောလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နအဖရဲ့ ဘေးမှာ ရပ်တည်တဲ့ အင်အား အရေအတွက် နည်းသထက် နည်းအောင် ကြံဆရပါမယ်။ ဒါဖြင့် ဘယ်လိုလူကို နအဖနဲ့ တသားတည်း ရပ်သူဆိုတာ ဘာစံနဲ့ တိုင်းမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားရပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်သူ ဒို့ရန်သူ၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးသူ ဒို့ရန်သူလို့ သတ်မှတ်လိုက်ရင် ရန်သူ အဝန်းအဝိုင်းဟာ သိပ်ကျယ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ အလုံးစုံ တူညီတဲ့လူမှ ကိုယ့်လူ၊ ကိုယ့်မဟာမိတ်လို့ သဘောထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ တချို့ကိုနားလည်ယူတာ၊ ခွင့်လွှတ်တာ၊ ကြားသဘောထားတာတွေ လုပ်ရမှာပါ။
ဒါကြောင့်မို့ ဒီတပွဲမှာ အဓိကထားရမယ့် စံ၊ ဒါမှမဟုတ် စည်းဟာ နအဖရဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေအပေါ်မှာ ဘယ်လို သဘောထားသလဲ ဆိုတာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး မဝင်ရေး ပြောရာမှာ အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံ အကြောင်းကို ထည့်မပြောလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာ တည်ရှိနေတဲ့ လွှတ်တော်တရပ်ဟာ ရုပ်သေး လွှတ်တော်ထက်တောင် ဆိုးတဲ့ ညောင်နှစ်ပင် ညီလာခံသာသာ လွှတ်တော်ဖြစ်မှာပါ။
မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာမှာ အနှစ် (၂ဝ) ကျော် တရားမရှိ၊ ဓားမရှိ အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ နဝတ-နအဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ စစ်အာဏာရှင် အစိုးရတွေဖြစ်တယ် ဆိုတာလောက်ကိုတောင်မှ အသိအမှတ် မပြုတဲ့ လူတွေဟာ အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံကို စုံလုံးမှိတ် လက်ခံကြရုံမက ရှေ့နေလိုက်၊ အကာအကွယ်တောင် ပေးနေကြပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ မြန်မာပြည်သူတွေကို ရွေးကောက်ပွဲညီမျှခြင်း ဒီမိုကရေစီ၊ စစ်အာဏာရှင်တွေကို အထိန်းအကွပ်မရှိ အုပ်စိုးခိုင်းထားတာထက်၊ လွှတ်တော်တရပ် ရှိနိုင်ရင် တစုံတရာ ထိန်းကွပ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ စကားမျိုးပြောနေသူဟာ သူကိုယ်တိုင် ဘာမှနားမလည်လို့၊ ဒါမှမဟုတ် သိလျက်နဲ့ ညာနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုရှုပ်ထွေးပွေလီနေတဲ့အချိန်မှာ တွေ့နေရတဲ့ လုပ်ရပ်တခုက ကိုယ့်အချင်းချင်းရဲ့ အက်ကြောင်းတွေကို လိုက်စမ်းတာ၊ ရှာတာ၊ တွေ့ရင်နှဲ့တာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြားလူ၊ သမာသမတ်ရှိသူ၊ ဘက်မလိုက်သူ ဆိုတာမျိုးပြောပြီး ဒီချုပ်အပါ ပြည်သူလူထု အင်အားတွေကို သွေးတိုးစမ်းနေ၊ နှဲ့နေတာတွေလည်း တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါဟာ ဘယ်သူ့အကြိုက် ဖြစ်စေလို့၊ ဘယ်သူ့ကို အကျိုးပြုတယ်ဆိုတာ ရှင်းနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည် ပြည်သူလူထု အပေါ်မှာ မယုံတဲ့၊ အနာဂတ်ကို မယုံတဲ့၊ စစ်အုပ်စုရဲ့ အင်အားကို အထင်ကြီးလာတဲ့ တချို့လူတွေဟာ အခုအခါမှာ ကြားနေတယ်ဆိုတဲ့ အချိုးမျိုး ချိုးလာနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါတောင် နအဖရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ လုပ်မပြီးသေးပါဘူး။ လုပ်များပြီးသွားလို့ နအဖအစိုးရက သူတို့ကိုယ်သူတို့ “ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနဲ့အညီ အုပ်စိုးနေတဲ့အစိုးရ” လို့ ကြေညာလာရင် အဲဒီ “ကြားနေ” ပုဂ္ဂိုလ်များ ဘယ်လိုပြောကြဦးမလဲ မသိပါဘူး။ မမေ့ကြသင့်တဲ့ အချက်တချက်က ဒီနေ့လိုအခြေအနေမှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို နအဖက မတော်မတရား ဖျက်ဆီးနေတာကို ဘယ်လို သဘောထားသလဲ၊ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲ ဆိုတာဟာ ဒီချုပ်အဖွဲ့ဝင် မဟုတ်တဲ့ တခြား နိုင်ငံရေး သမားများနဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေကိုလည်း မှတ်ကျောက်တင်လိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အခက်အခဲတွေက ကြီးပါတယ်။ ပြည်သူလူထုမှတပါး တခြားဘယ်သူမှ သူတို့ကို မကယ်နိုင် ပါဘူး။ သူတို့သမိုင်းမှာ အောင်မြင်မှု အရဆုံး ဆိုတာဟာ ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ဖြစ်ပြီး အဲဒါဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဝိုင်းဝန်း ထောက်ခံမှုကြောင့် ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 11:40 AM ,0comments
နေ့စဉ်သတင်းများ ( ၂၄ - ၃ - ၁၀ )
■ ၀ နယ်မြေရှိ အမှုထမ်းတွေ အမြန်ဆုံး ထွက်ခွာဖို့ မြန်မာစစ်အစိုးရ ညွှန်ကြား သတင်း
■ ၀ နယ်မှ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေကို ပြန်ခေါ် သတင်း
■ နယ်ခြားစောင့်တပ်ပြောင်းရေး ၀ အဖွဲ့က လက်မခံ သတင်း
■ တရုတ်ပြည်လုပ် တင့်ကားများ မြန်မာပြည်ဘက် တင်ပို့နေ သတင်း
■ လုံခြုံရေးကောင်စီ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေး သတင်း
■ နိုင်ငံခြားသံအရာရှိများ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေကို လာရောက်တွေ့ဆုံ သတင်း
■ နစ်နာသူဖြစ်လို့ ကုစားခံချင်လို့ဟု ဦးတင်ဦး ပြော သတင်း
■ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ (၂) ဦး ထောင်ဒဏ် (၅) နှစ်စီ ချမှတ်ခံရ သတင်း
■ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ဖိနှိပ်ခံရမှု AI အဖွဲ့ မလေးရှားအစိုးရကို ပြစ်တင် သတင်း
■ ကမ္ဘာတ၀ှမ်း မြန်မာတွေ စုပေါင်းပြီး ပြည်တွင်းမှ လူမှုဝန်ထမ်းကောင်းတွေကို ဆုပေးမည် သတင်း
■ ဗိုလ်အောင်ကျော် ဆိပ်ကမ်းကို ဦးပိုင်သို့ လွှဲပြောင်းပေးမည် သတင်း
■ ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့် လုပ်ငန်းများမှ ၀န်ထမ်းများဘ၀ မသေချာ သတင်း
■ စစ်ဘေးစိုးရိမ်သည့် ၀ အရပ်သားရာချီ နေရပ်မှထွက်ခွာ သတင်း
■ NGO များ ၀ နယ်မှ ထွက်ခွာပေးရန် နအဖဗျူဟာမှူး သတိပေး သတင်း
■ ဝ'နယ်မှ ဝန်ထမ်းနှင့် NGO များ နေရပ်ပြန်ရန် နေပြည်တော် အမိန့်ထုတ် သတင်း
■ ဝ ဒေသရှိ နတလ ဝန်ထမ်းများကို ခွင့်ရက်ရှည်ပေး ခေါ်ယူ သတင်း
■ ၀ နယ်က နတလ ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ထမ်းများကို အပြီးခေါ်ထုတ်ကုန်ပြီ သတင်း
■ စစ်ကြောင်း၏ ပွိုင့်ထိုးမဖြစ်ဖို့ - တြိဂံတိုင်းမှူးထံ လားဟူပြည်သူ့စစ် တောင်းဆို သတင်း
■ တရုတ်စစ်ကားများ မြန်မာပြည်ဘက် ထပ်မံပို့ဆောင် သတင်း
■ ပါတီမှတ်ပုံတင်လျှင် (၂၄) မြို့နယ် ကန့်ကွက်မည် သတင်း
■ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖယ်ထုတ်ရမည့်ကိစ္စ အင်္ဂါဆုတောင်းသူများ လက်မခံ သတင်း
■ မြန်မာ (၉) ဦး သေဆုံးမှု ထိုင်းက ကရုဏာကြေးပေး သတင်း
■ ရွှေဂုံတိုင်နှင့် ရပ်တည်ရန် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ တိုက်တွန်း (ရုပ်သံသတင်း)
■ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို အစဉ်အလာအရ ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးနေတဲ့ စစ်အုပ်စု (ဆောင်းပါး)
■ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး၊ Force - ၁၃၆ … ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ကြေးနန်းနှစ်စောင် (ဆောင်းပါး)
■ စောင့်စားနေသူတို့ရဲ့ နေ့ရက်များ (ဆောင်းပါး)
■ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်လျှင် တိုက်ပွဲကို စွန့်ရာကျလိမ့်မည် (ဆောင်းပါး)
■ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးပါ၏။ သို့သော် … (ဆောင်းပါး)
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 10:18 AM ,0comments
အက်တလတ်စ် သို့မဟုတ် မိုးကောင်ကင်ကို အောင်နိုင်သူ
စာအုပ်များကို လှန်လှောရင်းက ဒိုင်ယာယီစာအုပ် တအုပ်ကြားမှ နှင်းဆီပွင့်ခြောက်ကလေး တခုကို တွေ့ရသည်။ အရောင် လွင့်ပြယ်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်တော် နမ်းကြည့်တော့ နှင်းဆီပန်း ရနံ့ ရနေသလို ခံစားရသည်။ ထိုနှင်းဆီပွင့်နှင့် ပတ်သက်သော အဖြစ်အပျက်များက ကျွန်တော့ ခေါင်းထဲမှာ အစီအရီ ပေါ်လို့လာလေသည်။ သည်တုန်းက ကျွန်တော်က ဆယ်တန်း အောင်ခါစ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်၏ ဇာတိ ချောက်မြို့ကလေးမှ ဦးလေးရှိရာ ရန်ကုန် မြို့ကြီးသို့ ပြောင်းရွှေ့ရသည်။ ဦးလေးက ရန်ကုန်မှာ " သရပါ" အမည်ရှိသော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေး ဖွင့်ထားသည်။ ကျွန်တော်က စားပွဲထိုး ၀င်လုပ်ရသည်။ တနေ့တွင် ထောင်ထောင် မောင်းမောင်း လူကြီးတယောက်နှင့် လူငယ်ငါးယောက် ဆိုင်ထဲသို့ ၀င်လာသည်။ လူကြီးမှာ ရုပ်ရည်တည်ကြည် ခံ့ညားသည်။ တောင့်တင်းသန်မာပြီး ယောက်ျား ပီသသူဖြစ်သည်။ စားပွဲထိုး ကောင်လေးက "စာရေးဆရာကြီး တခွက်" ဟု အော်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်က စာအလွန်ဖတ်သူ ဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာ ဆိုသည်နှင့် စိတ်ဝင်စားသွားသည်။ ဦးလေးကို မေးကြည့်တော့ "အဲဒါ စာရေးဆရာကြီး ဗန်းမော်တင်အောင် ပေါ့ကွ" ဟု ဖြေသည်။ ထိုစာရေးဆရာကြီး ရေးခဲ့သော ဘုန်းမောင့်တယောက်တည်းရယ်၊ ဒေါက်တာရေချမ်း စသော ၀တ္ထုများကို ကျွန်တော် သိပ်ကြိုက်သည်။ လူငယ်တွေက သူတို့နှစ်သက်ရာ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ မုန့်များ မှာလိုက်ကြသည်။ ထို့နောက် စာရေးဆရာ ဗန်းမော်တင်အောင်ကို မေးခွန်းများ တရစပ် မေးနေလေသည်။
"အင်္ဂလိပ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘာကြောင့်စစ်တိုက်ရတာလဲ ဆရာ" " မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ ရေနံ၊ ကျွန်းသစ်၊ ကျောက်သံ ပတ္တမြား စတဲ့ သယံဇာတပစ္စည်းတွေ လိုချင်လို့ပေါ့ဗျာ" " ဒါတွေရတော့ သူတို့ချမ်းသာတာပေါ့" ဒါပေ့ါဗျာ….. သယံဇာတ ပစ္စည်းတွေ ခွတုတ်ခွင့်ရတော့ ချမ်းသာတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေမှာသာ ဘာအကျိုး ခံစားခွင့်မှ မရဘဲ မွဲပြီးရင်းမွဲ လူမွေးတောင် မပြောင်တဲ့ဘ၀ ရောက်ခဲ့ရတယ်။
စာရေးဆရာကြီးက လူငယ်လေးများကို ခင်ဗျား၊ ကျွန်တော်ဖြင့် တလေးတစား ပြောဆိုနေသည်။
မြန်မာတွေက ဘာကြောင့် စစ်ရှုံးတာလဲ…
လူမျိုးညံ့လို့ မဟုတ်ဘူး။ အနော်ရထာ၊ အလောင်းဘုရားစတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ ထွန်းကားခဲ့တဲ့နိုင်ငံပဲ။ မဟာဗန္ဓုလ စစ်သူကြီးဆိုရင် အင်္ဂလိပ်တွေကတောင် လေးစားခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတဦးပေါ့။ အင်္ဂလိပ်တွေက သေနတ်နဲ့ ပစ်တယ်။ မြန်မာတွေ က ဓားနဲ့ခုတ်တယ်။ လက်နက်အားကွာတော့ စစ်ရှုံးရတာပေါ့။
သူက လက်ဖက်ရည်ကို တစိမ့်စိမ့် အရသာခံပြီးသောက်နေတယ်။
သူရဲကောင်းဆိုတာ ဘယ်လိုလူကို ခေါ်တာလဲဆရာ
အများအကျိုးအတွက် ကိုယ်အသက်ကိုမငဲ့ကွက်ဘဲ စွန့်လွှတ်စွန့်စားသူကို ခေါ်တယ်။
သူရဲကောင်း ဖြစ်ချင်ရင် ဘယ်လို ဂုဏ်အင်္ဂါတွေနဲ့ ပြည့်စုံဖို့ လိုသလဲ
ရဲ…. ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် သတ္တိရှိပြီး ရဲရင့်ရတယ်။ ကောင်း..ဆိုတဲ့ ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ညီညွတ်အောင် စိတ်ထား ကောင်းဖို့လိုတယ်။ အဲဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့ ပြည့်စုံမှသာ သူရဲကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်….
ကြောက်တဲ့သူတွေက သူရဲကောင်း မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့..
ဟုတ်တယ်… ကြောက်လွဲ ရဲမင်းဖြစ်ဆိုတဲ့ စကားရှိတယ်။ ကြောက်တဲ့လူဟာ အခွင့်ကောင်းတွေကို လက်လွတ် ဆုံးရှုံးစေတယ်။ သူရဲကောင်း ဖြစ်ချင်ရင် ကြောက်စိတ် မမွေးမိဖို့လိုတယ်။ စကားပုံ တခုရှိတယ်ဗျား။ ကြောက်စိတ်ဟာ ၀ံပုလွေကို ရှိရင်းစွဲ အရွယ်ထက် နှစ်ဆ ပိုကြီးစေတယ်တဲ့။ ဆိုလိုတာက ကြောက်စိတ်ဟာ ရန်သူကို ပိုကြောက်ရွံ့စေတယ်။ လောကမှာ ကြောက်စရာကောင်းဆုံးအရာက အဲဒီ့ကြောက်စိတ် ကိုယ်တိုင်ပဲ။
သူက နံပြားထောပတ်သုတ် တဖက်ကို ကောက်ဝါးနေပြန်သည်။ သတ္တိရှိပြီး ရဲရင့်ရုံ တခုတည်းနဲ့ သူရဲကောင်း မဖြစ်နိုင်ဘူး လားဆရာ…
သူရဲကောင်းတာ အများအကျိုး၊ တနည်းအားဖြင့် ပြည်သူလူထု အကျိုးကို ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး ဆောင်ရွက်ရတဲ့ အလုပ်ကိုး။ ဒါကြောင့် စိတ်ထားကောင်းဘို့လဲ လိုအပ်တယ်။ စိတ်ထား ကောင်းသူတွေမှသာ မေတ္တာအားကြီးတယ်။ မေတ္တာအားကြီးသူ မှသာ အများအပေါ် ငဲ့ညှာ ဂရုဏာ ထားတဲ့ အလုပ် လုပ်နိုင်တယ်။ စိတ်ထား မကောင်းတဲ့သူကြောင့် အများအပေါ် မေတ္တာ မထားနိုင်ဘူး။ အများအကျိုးကို မကြည့်ဘူး။ ကိုယ့်နဲ့ ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်း ကောင်းဖို့ပဲကြည့်တယ်။ အတ္တ သမားတွေပေါ့ဗျာ။ အတ္တသမားဟာ ဘယ်တော့မှ သူရဲကောင်း မဖြစ်နိုင်ဘူး။
သူက ယပ်ခပ်ပေးနေသော ကျွန်တော့အား ပြုံးပြလိုက်သည်။
သူရဲကောင်းဆိုတာ ပညာတတ်ဖို့ လိုသလားဆရာ..
လိုတာပေါ့ဗျာ.. ပညာရှိမှ သူတော်ကောင်းတရားကို နားလည်တယ်။ သူတော်ကောင်းတရား နားလည်မှ အများအကျိုး ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ အများအကျိုး ဆောင်ရွက်မှ သူရဲကောင်း ဖြစ်မှာပေါ့။
ပညာ ဆိုတာ အသိနဲ့၊ အတတ်ကို ပညာလို့ခေါ်တယ်
ဘယ်ဟာအမှန်၊ ဘယ်ဟာမှား၊ ဘယ်ဟာ တရား၊ ဘယ်ဟာမတရား သိတဲ့ပညာကို အသိပညာလို့ခေါ်တယ်။ အသက်မွေး မှုပညာ၊ စစ်ရေးပညာ၊ စီးပွားရေးပညာ ၀ိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံစတဲ့ အတတ်တွေကို အတတ်ပညာလို့ခေါ်တယ်။
စာရေးဆရာကြီးက လက်ဖက်ရည်ကို မော့သောက်ပြီး လက်စသတ်လိုက်သည်။ နောက်နံပြား ထောပတ်သုတ်ကို ယူစားနေ ပြန်သည်။
သူရဲကောင်းက ဘာလို့ ပညာတတ်ဘို့ လိုတာလဲ….
သူရဲကောင်း ဆိုတာ မှန်တဲ့တရားတဲ့ဘက်က ရပ်တည်ရတယ်။ အမှား အမှန်၊ မတရား တရား ခွဲခြားသိဘို့ အသိပညာရှိမှ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ မှားတဲ့ဘက်၊ မတရားတဲ့ဘက်က ရပ်တည်နေရင် လူဆိုး လူယုတ်မာ ဖြစ်သွားတော့တယ်။ ဒီတော့ သူရဲကောင်းမှ မဟုတ်ဘူး။ လူတိုင်း ပညာတတ်လေ ကောင်းလေပဲ။ ပညာတတ်ရင် အမှန်တရား ထွန်းကားတယ်။ အမှတ်တရား ထွန်းကားမှ တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းတယ်။
အမှန်ဆိုတာ နှစ်မျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆရာ…. ပိုက်ဆံတပြားရဲ့ ခေါင်းနဲ့ ပန်းလိုပေါ့၊ ဆရာ့ဘက်က ကြည့်တော့ ခေါင်း၊ ကျွန်တော့ဘက်က ကြည့်တော့ ပန်း။ ကဲ နှစ်ခုစလုံးမှန်မနေဘူးလား။
စာရေးဆရာက ခေါင်းညိတ်လိုက်ပြီး မှန်ပါတယ်။ ခင်ဗျားပြောသလို အမှန်ဆိုတာ အနည်းဆုံး နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တရားကတော့ နှစ်မျိုးမရှိဘူး။ လောကီရော သံသရာပါ ကောင်းတဲ့တရား တမျိုးပဲရှိတယ်။
ကျွန်တော့ကို နားလည်အောင် ရှင်းပြပါအုံး….
အမှန်တရားဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ကြားဖူးတယ်မဟုတ်လား….
ခင်ဗျားတို့ပြောသလို အမှန်ဟာ အနည်းဆုံးနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လူလောက ဖြစ်စဉ်ထဲက အမှန်တွေကိုတော့ တရားနဲ့ မှတ်ကျောက် တင်ကြည့်ရတယ်။ တရားနဲ့ အမှတ်ကျောက် တင်ခံနိုင်မှသာ အမှန်တရားလို့ ခေါ်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် တရားမှသာ အမှန်ဖြစ်တယ်။ မတရားတာ မှန်သမျှ အမှားပဲ။
ကောင်းပြီး မြန့်မာ့သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် တောင်သူလယ်သမား အရေးတော်ပုံဆိုတာ ခင်းဗျားတို့ တွေ့ရမယ်။
ဆရာစံနဲ့ တောင်သူလယ်သမားတွေ အင်္ဂလိပ်ကို တော်လှန်ခဲ့တဲ့ အရေးတော်ပုံ မဟုတ်လား။
ဒီကိစ္စမှာ လယ်သမားတွေ သူပုန်ထတာကို အင်္ဂလိပ်အစိုးရက မလိုလားဘူး၊ မှားတယ်လို့ပြောတယ်။ သူတို့အတွက် အမှန်က မြန်မာနိုင်ငံကို ဆက်လက်ကျွန်ပြုပြီး ဂုတ်သွေးစုပ် အမြတ်ထုတ်ဖို့ပဲ။ လယ်သမားတွေဘက်က ကြည့်တော့ ဒီတိုင်းပြည်က တို့တိုင်းပြည် ကျွန်ဖြစ်ရတာ အနေဆင်းရဲ အစားဆင်းရဲနဲ့ သေတောင်မှတည့် သြော်ကောင်း၏ ဘ၀မို့လို့ သူပုန်ထတာ မှန်တယ်။ ဒီအမှန်နှစ်ခုကို တရားနဲ့ မှတ်ကျောက်တင်ကြည့်ရင် ဘယ်လို အဖြေထွက်မလဲ။
လယ်သမားတွေ သူပုန်ထတာ အမှန်တရားပဲ…
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်က သူများတိုင်းပြည်ကို မတရားသိမ်းပိုက် ထားတာကိုး စာရေးဆရာက ကျေနပ်စွာ ပြုံးလိုက်ပြီး မှန်တယ် ခင်ဗျားပြောတာ မှန်ပါတယ်။ အမှန်တရားကို ရွေးချယ်နိုင်မှ သူရဲကောင်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
တနည်းအားဖြင့် သူရဲကောင်းဟာ အမှန်တရားဘက်က ရဲရဲကြီး ရပ်တည်ရမယ်။ ကိုယ်က သူရဲကောင်း မဖြစ်ခဲ့တောင်မှ သူရဲကောင်းတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို လက်ခုပ်တီး အားပေးရဲတဲ့ ပြည်သူကောင်းတော့ ဖြစ်ရမယ်။ အချောင်သမား မဖြစ်ပါစေနဲ့…
စာရေးဆရာက စီးကရက်တလိပ်ထုတ်၍ မီးညှိလိုက်ပြီး ဖွာရှိုက်နေပြန်သည်။
အချောင်သမားဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ ဆရာ…
နိုင်မှ တိုက်တယ်ဆိုတာ အချောင်သမားပဲ၊ အဲဒီလူတွေဟာ ဟိုဘက်လိုလို ဒီဘက်လိုလို ကြားနေသလို ၀ါးတားတား လုပ်တတ်ကြတယ်။ သူရဲကောင်းဆို ကြားမနေဘူး။ အမှန်တရားဘက် ရဲရဲကြီး ရပ်တည်တယ်။ ကြားနေတယ်ဆိုတာ လူကြောက်၊ ဒါမှမဟုတ် အချောင်သမားပဲ။ အမှန်တရား ဘက်က ရပ်တည်ခြင်း မရှိဘဲ ကြားနေတာဟာ အမှား၊ ဒါမှမဟုတ် မတရားကို သွယ်ဝိုက်သော နည်းနဲ့ အာပေး ထောက်ခံတာပဲ။ အမှန်တရား မှေးမှိန် အားနည်းလေ၊ အချောင်သမား များလေပဲ။ သူရဲကောင်းဟာ ဘယ်လို အခြေအနေမှာမဆို အမှန်တရားကို သစ္စာမဖောက်ဘူး။
အသိပညာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ အတတ်ပညာကကော သူရဲကောင်းတယောက်အတွက် လိုတာပဲလား။
မြန်မာတွေ အင်္ဂလိပ်တွေကို စစ်ရှုံးခဲ့တာဟာ အတတ်ပညာ ချို့တဲ့လိုပဲ။ သူတို့က သေနတ်နဲ့ ပစ်တယ်။ ကိုယ်က ဓားနဲ့ခုတ်တယ်။ အားမတန်တော့ ရှုံးရတာပေါ့။ အောင်မြင်တဲ့ သူရဲကောင်းဖြစ်ချင်ရင် ရန်သူကို ယှဉ်နိုင်တဲ့ အတတ်ပညာရှိဖို့ လိုတယ်။ သူရဲကောင်းမှ မဟုတ်ဘူး။ လူတိုင်း ပညာတတ်လေ ကောင်းလေပဲ။ ကိုယ်တတ်တဲ့ ပညာက သူများတိုင်းပြည်ထက် သာရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည် ရှေ့တန်းရောက်မယ်။ ပညာမတတ်ရင်တော့ သူများနောက် ရောက်မှာပဲ။ သူက စီးကရက် တရှိုက်မတ်မတ် ဖွာရှိုက်နေပြန်သည်။
သူရဲကောင်းတယောက်ရဲ့ အကောင်းဆုံးလက်နက် ဘာလဲဆရာ။
သူရဲကောင်းတယောက်ရဲ့ အကောင်းဆုံးလက်နက်ဟာ သူရဲ့ စိတ်ဓာတ်ပဲ။ ဘုရင် ဧကရာဇ်တပါးဟာ သူရဲကောင်း တယောက်ကို အကျဉ်းချချင်ချ၊ ဒါမှမဟုတ် သစ်ပစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ အရှုံးပေး အညံ့ခံအောင် ဘယ်နည်းနဲ့မှ မလုပ်နိုင်ဘူး။ ငါ၏ ဦးခေါင်းကား သွေးသံတို့ဖြင့် ချင်းချင်းနီ၏၊ သို့သော် မညွှတ် ဆိုတဲ့စကားကို ကြားဖူးတယ် မဟုတ်လား။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သိပ်ကြိုက်တဲ့ စကားမဟုတ်လား
ဗိုလ်ချုပ်က အဲဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့လို့ မြန်မာပြည် လွှတ်လပ်ရေး ရခဲ့တာပေါ့။
စာရေးဆရာက လူငယ်တယောက်ငှဲ့ပေးသော ရေနွေးပန်းကန်ကို ယူသောက်နေပြီး….
ဓားလှံ မကိုင်ဘဲနဲ့လဲ သူရဲကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူလူဘက်က ရပ်တည်သူ မည်သူမဆို သူရဲကောင်းဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ ဥပမာ စားရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ သတင်းဆရာတွေဟာ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ ဆန့်ကျင်ရေးမှာ၊ ကလောင်လက်စွဲပြီး တိုက်ပွဲ ၀င်ခဲ့ကြတယ်။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့ ရန်သူတော် စာရင်းထဲမှာ ရန်သူနံပါတ်တစ်က ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ရန်သူနံ့ပါတ်ငါး အဆင့်ပဲ ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီထိအောင် ကလောင်က လက်စွမ်းထက်ခဲ့တယ်။ လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ တန်းတူညီမျှမှု ဒီသုံးခုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သူ မည်သူမဆို သူရဲကောင်းပါပဲ။ စားသောက်ပြီးနောက် သူ့ အဖွဲ့သားများ သရပါ ဆိုင်ကလေးထဲမှ ထွက်ခွာသွားကြသည်။ သို့သော် သူရဲကောင်းနှင့် ပတ်သက်သော အယူအဆများက ကျွန်တော့ရင်ထဲမှာ စွဲမက် ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။
နေ့လည်တိုင်းတွင် စာရေးဆရာက ကျွန်တော်တို့ သရပါ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးသို့ ရောက်လာတတ်သည်။ အပေါင်းသင်း မင်သူဖြစ်၍ သူနှင့် အတူ လူအုပ်တမကြီး ပါလာလေ့ရှိသည်။
စာရေးဆရာတခွက်ဟု လှမ်းအော်လိုက်တိုင်း သူက နှစ်လိုဖွယ်အပြုံနှင့် ကျွန်တော့ကို နှုတ်ဆက်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်တော် သတိထားမိသော သူ၏ အမူအကျင့်တခုမှာ စီးကရက်စွဲ အလွန်အကျွံ သောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မိုးခိုးမစဲအောင် သောက်လေ့ ရှိပြီး စီးကရက် စွဲနေဟန်တူသည်။ တခါသော် ကျွန်တော်တို့ဆိုင်သို့ အကြာကြီးမလာဘဲ ပျောက်ချက်သား ကောင်းနေသည်။ တနေ့မှာ ဆယ်နှစ် အရွယ်ခန့်ရှိ သူ့သားလေးကို လက်တွဲပြီး ဆိုင်ထဲကို ၀င်လာသည်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ မယုံနိုင်စရာ ပိန်ချုံ ကျသွားသည်။
စီးကရက် မှာဦးမလား ခင်ဗျား…
နေ…နေ …. ကိုယ်စီးကရက် ဖြတ်လိုက်ပြီ
သူ့သားလေးကို ရုပ်ရှင်ပြလာဟန်တူသည်။ သားကလေးက ကြည့်ခဲ့သော ရုပ်ရှင်အကြောင်း စမြုံ့ပြန်နေသည်။
ဟာကြူလီက တော်တော်တောင့်တာပဲ။ လူဆိုးနှစ်ယောက်ကို လက်တဖက်စီနဲ့ အသာလေး မထားနိုင်တယ်နော် ဖေဖေ..၊
အဲဒါ အလေးမလို့ ကြွက်သား တုပ်ခိုင်လာတာပေါ့ သားရဲ့။ ယောက်ျားဆိုတာ ယောက်ျား ပီပီသသနဲ့ တောင့်တင်း သန်မာရတယ်။
ဟာကြူလီထက် သန်တဲ့လူ ရှိသေးလားဟင်..
ဂရိပုံပြင်ထဲက အက်တလတ်စ် ဘီလူးကတော့ လောကမှာ အသန်မာဆုံးပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက တောင်ထွတ် တခုပေါ်ကနေ မိုးကောင်းကင်ကြီးကို ဒူးထောက်ပြီး ထမ်းထားနိုင်လို့ပဲ..
ဟာ…. မိုးကောင်ကင်ကြီး တခုလုံးကို ထမ်းထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ တော်တော်သန်တာပေါ့။ ဒါနဲ့ သူက ဘာကိစ္စ မိုးကောင်း ကင်ကို ထမ်းထားရတာလဲ..
လူသားတွေအပေါ် မိုးကောင်းကင်ကြီး ပိကျလာမှာစိုးလို့ပေါ့ သားရဲ့…
နာတာပေါ့ကွယ်။ နောက်ဆုံး မခံနိုင်တော့ ပါးဆီးယပ်စ်ခေါ်တဲ့ သူရဲကောင်းကို အကူအညီတောင်းရတယ်…
ပါးဆီးယပ်စ်က သူရဲကောင်းတဦးပေါ့၊ သူ့ကို အေသင်မြို့စောင့် နတ်သမီး အေသီနာက စုန်းမကြီး ဂေါ်ဂွင်မဒူဆာရဲ့ ဦးခေါင်းကို ဖြတ်ခိုင်းတယ်။ ဒီစုန်းမကြီးရဲ့ခေါင်းက ဆံပင်တွေက မြွေတွေဖြစ်နေပြီး လူက တောင်ပံတွေနဲ့ ဂဠုန်ပုံဖြစ်နေတယ်။ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးက သူ့မျက်လုံးတွေပဲ။ မြင်ရသူကို ကျောက်ရုပ်ဖြစ်သွားစေတယ်။ ပါးဆီးယတ်စ်က လူသန်ကြီး အက်တလတ်စ် ကို ဂေါ်ဂွင်မဒူဆာနေတဲ့ နေရာကို လမ်းညွှန်ပေးဖို့ အကူအညီ တောင်းတယ်။ အတ်တလတ်စ်က မိုးကောင်းကင်ကို ထမ်းထားရတာ ဆိုတော့ သူ့ဦးခေါင်းက တိမ်တွေအပေါ် ရောက်နေပြီး ဂေါ်ဂွင်မဒူဆာနေတဲ့ နေရာကို လှမ်းမြင်ရတာကိုး။ အက်တလတ်စ်က ကောင်းပြီး။ မင်းကို မဒူဆာရှိတဲ့ နေရာကို လမ်းညွန်ပေးလိုက်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီမိုး ကောင်ကင်ကြီးကို ထမ်းထားရတဲ့အတွက် ငါ့တကိုယ်လုံး ညောင်းညာ ကိုက်ခဲလှပြီ။ ဒီဝေဒနာ လွှတ်မြောက်အောင် မဒူဆာ ရဲ့ ဦးခေါင်းပြတ်ကို ရခဲ့ရင် ငါ့ကို အရင်ပြပါ ဆိုပြီး တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ မဒူဆာရဲ့ ဦးခေါင်းကို ဖြတ်ပြီးတော့ ပါးဆီးယတ်စ်က အက်တလတ်စ်ကို ပြလိုက်တယ်။ ချက်ချင်းပဲ အက်တလတ်စ်ဟာ ကျောက်တောင်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားတယ်ကွဲ့…
သဘာဝတရားအတိုင်း ကောင်းကင်က သူ့ဘာသာသူ မိုးပေါ်မှာနေတာ။ အလကား မြေပေါ် ရောက်လာပါ့မလား။ ရောက်လာဦးတော့ ပိရင် အများကသေမှာပဲ။ ဘာကြောင့် ကိုယ်က အများအတွက် ပခုံအနာခံပြီး ထမ်းပိုးနေမလဲ။ တော်တော်ရူး တဲ့ ဘီးလူးပဲ…
သား၏ စကားကို ဖခင်စာရေးဆရာက သဘောကျစွာ ပြုံးရယ်နေလေသည်။ ပြီးမှ…
အများအတွက် ပခုံးအနာခံပြီး ထမ်းပိုးနေတဲ့ အက်တလတ်စ်ဘီးလူးကို အရူးလို့ ထင်ရပေမဲ့ ပုံပြင်ထဲကလိုသာ သူ့ကြောင့် လူတွေ အသက်ရှင်ခွင့် ရခဲ့ရင် အက်တလတ်စ်ကို သူရဲကောင်းလို့ ဖေဖေတို့ မှတ်ယူသင့်တယ်။ ကောင်းကင်က သူ့ဘာ သာသူ မိုးပေါ် ရှိနေသင့်ပေမဲ့ တခါတရံ မြေပေါ်ကျလာပြီး ကောင်းကင်ပိတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်ကွဲ့။ သားလေးကြီးတော့ ဒီလို ကောင်းကင်ပိတဲ့ အဖြစ်မျိုး ကိုယ်တိုင် ကြုံကောင်း ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ အဖိနှိပ်ခံ လူသားတွေအတွက် ကိုယ်တိုင်က အက်တလတ်စ် ဘီးလူးလို ထမ်းပိုးနိုင်ရင် ထမ်းပိုး၊ မထမ်းပိုးနိုင်ရင် ပါဆီးယပ်စ်လို သူထမ်းပိုးနေတဲ့ ဝေဒနာကို သက်သာအောင် လုပ်ပေးသင့်တယ်။ ဟု တွေးတွေးဆဆ ပြောနေသည်။ ထို့နောက် သူ့သားလေးကို လက်တွဲပြီး သရပါ ဆိုင်ကလေးက တရွေ့ရွေ့ ထွက်ခွာသွားလေသည်။ ထိုမြင်ကွင်းမှာ စာရေးဆရာကြီး ဗန်းမော်တင်အောင်ကို ကျွန်တော်နောက်ဆုံး တွေ့ခဲ့ရသော မြင်ကွင်းဖြစ်သည်။ မကြာမီ သူ ဒုတိယအကြိမ် ဆေးရုံတက်ရသည်။ အဆုတ် ကင်ဆာရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သွားကြောင်း ကြားရသည်။ ကျွန်တော် လေးစားသော စာရေးဆရာကြီး ဖြစ်၍ နောက်ဆုံး ဂါဝရပြုသည့် အနေဖြင့် သူ၏ အသုဘသို့ ကျွန်တော် သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဆရာ ဗန်းမော်တင်အောင်မှာ လူချစ်လူခင်များ သူဖြစ်ကြောင်း သူ့အသုဘကို ကြည့်၍ သိနိုင်သည်။ လူထုလူတန်းစား အသီးသီးက လိုက်ပါ ပို့ဆောင်ကြပါသည်။ အသုဘမှာ ကြက်ပျံမကျ စည်ကားလှသည်။ သူ့အတွက် ပန်းခွေ၊ ပန်းခြင်းတို့မှာ ရေတွက်၍ မကုန်နိုင်တော့။ သူ့ကို သင်္ဂြီုလ်ပြီး ချိန်မှာ လူထုက ပန်းခွေပန်းခြင်းများမှ နှင်းဆီနီနီတပွင့်ကို ယူထားလိုက်သည်။
လူတယောက်ရဲ့ သမိုင်းဟာ လူ့လောကကြီးက သူ့ပခုံးအပေါ် ပစ်တင်လိုက်တဲ့ တာဝန်ကို သူဘယ်လောက် ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ တိုင်းတာရတယ်။
ဆိုသော စာရေးဆရာကား ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီ။ တကယ်တော့ သူသည် အက်တလ်စ်ဘီလူးလို မိုးကောင်ကင်ကို ပခုံးဖြင့် ထမ်းပိုးထားခဲ့သူ သူရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်သည်။ လူသေသော်လည်း သမိုင်းမသေ… နှင်းဆီနီနီကလေးက အခုတော့ ခြောက်သွေ့သွားခဲ့ပြီ။ သို့သော် နှင်းဆီပန်းရနံ့ကို ကျွန်တော်ရှူရှိုက်မိဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 9:49 AM ,0comments
တော်လှန်ရေးနေ့အကြို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်ဦး...
လူထုဦးစိန်ဝင်း NLD, ရွေးကောက်ပွဲတို့ကို သုံးသပ်ဝေ...
မန္တလေးကို ချစ်လို့ပါ။ မန္တလေးဆိုတာ မြန်မာပါ
Daw Aung San Suu Kyi does not want NLD to register...
PDC Monthly News Commentary, March 2010 (Eng)
နအဖကို တရားစွဲမှု အန်အယ်လ်ဒီ ပယ်ချခံရ ဒေါ်စုက မတရားသ...
နေ့စဉ်သတင်းများ ( ၂၃ - ၃ - ၁၀ )
ခြင်္သေ့နှင့် မနှိုင်းလောက်တဲ့ ကျဖင်ချုပ်အောင်သိန်းလင...
NLD Chair U Aung Shwe SendsaLetter to Sen Gen Th...
နေ့စဉ်သတင်းများ ( ၂၂ - ၃ - ၁၀ )
နအဖရွေးကောက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တစ်ပတ်အတွင်း နိုင...
နေ့စဉ်သတင်းများ ( ၂၁ - ၃ - ၁၀ )
လူထုစိန်ဝင်း၏ အမြင် - အန်အယ်လ်ဒီနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကေ...
နေ့စဉ်သတင်းများ ( ၂၀ - ၃ - ၁၀ )
ဒီကေဘီအေတပ်မှူး၏ နေအိမ်သစ်ဖွင့်ပွဲ ကြော်ငြာကပ် ဖိတ်...